စီရင်ချက်ချမယ့်ရက်ကို Aug 11သို့ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း တရားသူကြီးကြေငြာချက်အဆုံးမှာ ဒေါ်စုက သံတမန်များဖက်သို့လှည့်၍.. လူကြီးမင်းများကို နောက်ထပ်အလုပ်ရှုပ်စေအုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်ရှင် လို့ အရွှန်းဖောက်ပြောခဲ့သည်။
Friday, 31 July 2009 17:31 ဗထူး .ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ယခုလို တရားစွဲဆိုနေခြင်းသည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှ ပြဌာန်းထားသည့် လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း အပိုဒ် (၃) အား ချိုးဖောက်နေသည်ဟု (HRDP) ခေါ် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်မြှင့်တင်သူများကွန်ယက်က ယနေ့ပြောဆိုလိုက်သည်။
ဦးဝင်းတင်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံသူများ ထောင်ရှေ့သို့သွား
ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၀၉
Friday, 31 July 2009 16:13 ဗထူး .ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်းအား အမိန့်ချမည့်ရက် ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် (ဟံသာဝတီ) ဦးဝင်းတင်က စစ်အစိုးရအနေဖြင့် မတရားလုပ်ကြံနေမှုသာဖြစ်ပြီး ယင်းကိစ္စအား ရှောင်လွှဲ၍ မလွတ်တော့ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်သည်။
NLD လူငယ် 23ဦးခန့် အဖမ်းခံရ စာရင်း
၂၁။ အမည်မသိ (ပွင့်ဖြူရဲစခန်းမှာချုပ်ထား)ရဲစခန်းမှာချုပ်ထား)
၂၃။ ဦးညွှန့်လှိုင် (အောင်လံအမတ်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထောင်ချခဲ့ပါက နအဖ ကံကြမ္မာသည် အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်
၁၄ မေ ရန်ကုန်၊ ၊Freedom News Group
People Outrageous For Junta Action On Prominent Leader
မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ဖခင်ကြီးဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သမီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ယခုကဲ့သို့အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီး ဖမ်းဆီးထောင်ထဲပို့ ခြင်းကို စစ်တပ်တွင်းမှ အရာရှိများနှင့် စစ်အစိုးရလိုလားသူများပင် မကျေနပ်ဟု Freedom News Group မှစုံစမ်းသိရှိရသည်။
ယနေ့ ညလက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ဘီယာဆိုင် များနှင့် ရန်ကုန်မြို့ ရပ်ကွက်တွင်းရှိ လူအများစုဝေးကြသည့်နေရာများတွင် ဒေါ်စု ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူများက မကျေနပ်ချက်များဖြင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြသည်။ယနေ့ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ် နှင့် နိုင်ငံတကာသတင်းထုတ်လွှင့်ချက်များကို နားထောင်သူများလည်းအလွန်များသည် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားထောင်သွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့၍ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသည့် ကိစ္စနှင်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မြို့ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံရှိ ကုန်သည်တစ်ဦးက “သူတို့ လက်ခုပ်ထဲမှာ သူတို့ မျက်လုံးအောက်ကလူကို အပြစ်ရှိတယ် ဆိုပြီးထပ်ဖမ်းတာ တော့ ဘယ်သဘာဝ ကျမလဲ ၊ဒါနိုင်ငံတွင်းမှာတရားမျှတ မှုဆိုတာ လုံးဝမမရှိတော့ ဘူးဆိုတာ ပြလိုက်တာပဲဟုသူကပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ခံအချို့ ကလည်း ရေကူးဝင်ရောက်လာ သော အမေရိကန်နိုင်ငံသား ယက်ထော အားမုန်းတီးမှု ပိုနေကြပြီး သူ့ ကြောင့်ဒေါ်စုယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ရသည် ဟု သုံးသပ်ပြောဆိုကြသည်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံးကြီးမှ ခွဲစိတ်ကု ဆရာဝန်တစ်ဦးကမူ “ဒေါ်စု ကို ထောင်ချရင် နအဖ ကံကြမ္မာပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ် တစ်နိုင်ငံလုံးက သူ့ ကိုပိုချစ် ၊ပိုလေးစား၊ပို မြတ်နိုးကျတာ ကို ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်ကိုတော့ နအဖ ရင်ဆိုင်ရမယ်”ဟု သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားရုံးတင် စစ်ဆေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အနောက်နိုင်ငံများက ရှုံချကန့်ကွက်ထားပြီးပြန်လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုထားသည်။
ဒေါ်စုအား လာမည့် တနင်္လာနေ့ တွင် ရုံးတင်စစ်ဆေး ၍ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့မည် ဆိုပါက စစ်အစိုးရသည်ကိုယ့် သေတွင်းကိုယ်တူးသလိုဖြစ်သွား နိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားတစ်ဦး ကပြောသည်။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအပါအ၀င် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ ချုပ်အဖွဲ့ ဝင် သုံးဆယ်ကျော် ကိုဖမ်းဆီးထား
၃၁ ဇူလိုင် ရန်ကုန် ၊ ၊Freedom News Group
At least 30 National League for Democracy members arrested
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား တရားရုံးမှ စီရင် ချက် ချမှတ်မည့် နေ့ မတိုင် ခင်တွင် နိုင် ငံတ၀ှမ်းရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်အဖွဲ့ ဝင် ၃၀ ထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီးမှုများတွင်မကွေးတိုင်း မြို့ သစ်မြို့ နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသာအောင် လည်းပါဝင်သည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အပတ်စဉ် ဘုရားတွင် ၀တ်ပြုဆုတောင်းသည့်ဒေါ်နော်အုံးလှ လည်းပါဝင်ပြီး ဖမ်းဆီးပြီး မကြာခင် တွင် ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
ရန်ကုန် တိုင်းစမ်းချောင်းမြို့ နယ်တွင် နေထိုင် သော အောင်လံမြို့ နယ်လွှတ်တော် အမတ် ဦးညွန့်လှိုင် ကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီး မကြာခင် မှာ ပင် ပြန်လည် လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP)ကယနေ့ ထုတ်ပြန် သော ဖမ်းဆီးခံရသူ များစာရင်း မှာ
1. (Ko) Myint Ngwe (Yenangyaung Township, Magwe Division)
2. (Ko) Tint Lwin (Yenangyaung Township, Magwe Division)
3. (Ko) Than Aung (Yenangyaung Township, Magwe Division)
4. (Ko) Khin Win (Yenangyaung Township, Magwe Division)
5. (U) Aye Myint (Aunglan Township, Magwe Division)
6. (U) Min Maung (Aunglan Township, Magwe Division)
7. (Ko) Soe (Taungdwingyi Township, Magwe Division)
8. (Ko) Par Lay (Taungdwingyi Township, Magwe Division)
9. (Ko) Kyaw Naing (Taungdwingyi Township, Magwe Division)
10. (U) Tha Aung (MP) (Myothit Township, Magwe Division)
11. (Ma) Zin Ma Ma Tun (Myothit Township, Magwe Division)
12. (Ko) Than Soe Myint (Myothit Township, Magwe Division)
13. (U) Pike Ko (Pakokku Township, Magwe Divison)
14. (U) Kyaw Nyunt (Pakokku Township, Magwe Divison)
15. (U) Tin Myint Aung (Pakokku Township, Magwe Divison)
16. (U) Thaung Soe (Chairparson of Minbu Township, Magwe Division)
17. (Ko) Nay Myo Kyaw (Saku Township, Magwe Division)
18. (Ko) Aung Win (Pwintbyu Township, Magwe Division)
19. (Mg) Thu Ya (Pwintbyu Township, Magwe Division)
20. (Ko) Htay Win (Kamma Township, Magwe Division)
21. (Ko) Htein Win (Dagon Myothit Township, Rangoon)
22. (Daw) Khin Win Kyi (Dagon Myothit Township, Rangoon)
23. (Ma) Khin Myat Thu (Mingaladon Township, Rangoon)
24. (Ko) Nay Lin Kyaw (Dawbon Township, Rangoon)
25. (Ko) Nay Lin Soe (Tharkayta Township, Rangoon)
26. (Ko) Sai Kyaw Kyaw (Tamwe Township, Rangoon)
27. (Ko) Tin Min Naing (North Okkalapa Township, Rangoon)
28. (Daw) Naw Ohn Hla (North Okkalapa Township, Rangoon)
29. (U) Nyunt Hlaing (MP-Aunglan) (Sanchaung Township, Rangoon)
30. (Ko) Myint Aung
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမိန့် ချမည့်နေ့ သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ သို့ ထပ်မံရွှေ့ဆိုင်း
၃၁ ဇူလိုင် ရန်ကုန်၊ ၊Freedom News Group
Burma Court Delay Aung San Suu Kyi Verdict Until 11 August
ရန်ကုန် မှ လာသော ရိုက်တာ သတင်းအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အားအမိန့် ချမှတ် မည့်နေ့ ကိုမူလတရားရုံးချိန်း နေ့ မှ ရွှေ့ဆိုင်းကာ သြဂုတ် လ ၁၁ ရက်နေ့ သို့ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။ယနေ့ အင်းစိန်ထောင် ရှေ့ သို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် အဖွဲ့ ဝင် တစ်ဦးက “ညကတည်းက သတင်းထွက် နေတယ် စာဝေတယ် ၊ဆန္ဒပြဖို့ ရှိနေ တယ် ၊ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည် နဲ့ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး နှစ်ပတ်လည် တို့ ရှိနေသေးလို့ အောက်တိုဘာလ လောက် ထိ အချိန်ဆွဲထားအုံးမှာ” ဟု Freedom News Group သို့ ပြောသည်။
ယနေ့ အင်းစိန်ထောင် အနီးတစ်ဝိုက် တွင်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်စွာချထားသော် လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အားထောက်ခံသူ ငါးရာခန့် စုရုံးခဲ့သည် ဟု သတင်းရရှိသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ် မြောက်ရေးလှုပ်ရှား သူ အယောက် နှစ်ဆယ်ထက်မနည်းကို ယမန်နေ့ က ဖမ်းဆီးခဲ့သည် ဟု သတင်းရရှိသည်။ “လူတွေ က ပေါက်ကွဲလုနီးနီး ပဲ တကယ် လူထုကို မှန်မှန် ကန်ကန် နဲ့ ခေါင်းဆောင် မှု ပေးနိုင်မယ့် သူတစ်ယောက်ရှိ ဖို့ ပဲလိုတယ်”ဟု အင်းစိန် ဈေးမှ ဈေးသည် တစ်ဦးက ပြောသည်။
ယနေ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား စီရင်ချက်ချမည်ဆိုသည့်အတွက် ထောင်ဂဏန်းနီးပါး ပြည်သူလူထုတို့သည် အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်း အင်းစိန်ထောင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖြန့်ကြက်လာရောက်ကြကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံ တဦးက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့က တာဝန်ကျတဲ့သူတွေပါ။ အမိန့်တော့ပေးထားပါတယ်။ ဆန္ဒလာပြတဲ့ သူတွေ၊ စာရွက်ဝေတဲ့ သူတွေ၊ အဲဒါမျိုးတွေကို တွေ့တာနဲ့မစစ်ဆေးဘဲ ဖမ်းဆီးရမှာပါ” ဟု အင်းစိန် ပန်းခြံထောင့်ရှိ တာဝန်ကျ ရဲတဦးက ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။
အင်းစိန်ခုံးကျော်တံတားသို့ မည်သူတဦးတယောက်မျှ မသွားရဟု အမိန့်ထုတ်ထားကာ ယနေ့ အဆိုပါခုံးတံတား၌ ရဲများနေရာချထားရာတွင် အမျိုးသမီးရဲအရာရှိများပါ နေရာယူ စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။
စားသုံးရန်အန္တရာယ်ရှိသည့် ကြက်ဥအတုများ နယ်စပ်မှတဆင့် ၀င်ရောက်လျက်ရှိသည်ဟု ယမန်နေ့ညက မြန်မာ့ရုပ်သံလှိုင်း များမှ သတင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
အကာနှင့်အနှစ် ရောနှောနေသည့် ကြက်ဥအတုများကို ဓာတုဗေဒဆေးဝါးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ၎င်းကြက်ဥအတုများကို တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာသို့ သတင်းပို့ရန်ပါရှိသည်။
သို့သော် ကြက်ဥအတုများ မည့်သည့်နယ်စပ်မှ ၀င်ရောက်လာသည်ကို ထည့်သွင်းပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲ စားသုံးပါက အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုသာ ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ကြက်ဥအတု ပေါ်ထွက်သည့်ကိစ္စကို မြန်မာစစ်အစိုးရ မီဒီယာများက တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ဖော်ပြနေခြင်းမှာ လူများကို အာရုံပြောင်းရန် ဆောင်ရွက်ချက်တရပ်ဖြစ်သည်ဟု ပြည်တွင်းသတင်းထောက်တဦးက သုံးသပ်သည်။
၎င်းက “အခု လူထုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုအပေါ် စိတ်ဝင်စားနေတာကို အာရုံပြောင်းအောင် လုပ်တာပဲဖြစ်တယ်။ ကြက်ဥတလုံး ကျပ် (၇၀) လောက်ရှိတဲ့ဟာ အတုလုပ်စရာလားဗျာ။ သူတို့ရေးထားသလို ဓာတုဗေဒနည်းနဲ့လုပ်တဲ့ ကြက်ဥ အတုက အစစ်ထက်တောင် ပိုကုန်ကျဦးမယ်။ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သတင်းမှာကလည်း ကြက်ဥအတုတွေ နယ်စပ်က ၀င်လာတယ်ဆိုတာလောက်ပဲပါတယ်။ ဘယ်အချိန်တုန်းက ဘယ်နေရာကနေ သိမ်းဆည်းရမိတယ်။ ဘယ်မှာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ကြည့်လို့ သိရတယ်ဆိုတာတွေ ဘာမှမပါဘူး” ဟု သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါကြက်ဥအတု သတင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်အစိုးရပိုင်သတင်းစာများတွင် ကြက်ဥအတုသည် ခပ်ပြင်းပြင်း ကိုင်လှုပ်ကြည့်ပါက အဆန်ချောင်ကြောင်း၊ ဇလုံ၊ ပန်းကန်တခုခုပေါ်တွင် တင်၍ လှည့်ကြည့်ပါကလည်း လည်ပတ်နှုန်းပိုကြာသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် ကြက်ဥအတုရောင်းချခြင်းများ၊ ကြက်ဥအတုအသုံးပြုသည့် စားသောက်ဆိုင်များအား သတင်းပို့တိုင်ကြားရန် နှိုးဆော်ထားသည်။
ထိုင်းနယ်စပ်မှ မြန်မာကုန်သည်တဦးက “ရန်ကုန်မှာရောက်နေတာကြာပြီ။ တရုတ်ဘက်ကလာတာပါ။ တရုတ်ကတော့စုံတယ်။ ဆန်အတု၊ ကြက်ဥအတု အကုန်သွင်းတယ်။ အစိုးရက ဘယ်ကလာသလဲဆိုတာ သိပါတယ်။ သူ့ဆရာ တရုတ်ကိုတော့ ဒဲ့ဒိုးဘယ်ပြောရဲမှာလည်း” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်ဘက်မှ ကြက်ဥအမြောက်အမြားတင်သွင်းနေပြီး ယခုကဲ့သို့ ကြက်ဥအတုသတင်းကြောင့် ကုန်သည်များ တအံ့တသြ ဖြစ်ကြရသည်ဟုလည်း မဲဆောက်မြို့မှ ကြက်ဥနှင့်မွေးမြူရေးအစာရောင်းသည့် ဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ထိုင်းမှာကြက်ဥအတုမရှိဘူး။ ထုတ်ကုန်က စားသုံးမှုလုံလောက်တဲ့အပြင် နိုင်ငံခြားကိုလည်း ကုမ္ပဏီတွေက ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းကနေ ပို့တာတွေရှိတယ်။ မဲဆောက်ကနေလည်း တရက်ခြား မြန်မာဘက်ကို အလုံး (၁) သိန်းကျော် ပုံမှန်ပို့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စက ကုန်သည်တွေကို ဇဝေဇ၀ါဖြစ်စေတယ်” ဟု ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကြက်ဥအတုနှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကိုလည်း ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် သတင်းစာများတွင် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဖော်ပြခဲ့ကြပြီး ကြက်ဥထဲတွင် (မယ်လမင်း) ဓာတ်နှင့် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ အလွန်အကျွံပါဝင်ပြီး ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သည်ဟု ရေးသားထားသည်။
ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် အဆမတန်ဈေးမြင့်လာသည့်အတွက် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှစတင်ကာ မြန်မာကြက်သွန်နီများ ထိုင်းဘက်တင်ပို့မှုကို မြန်မာဘက်က ကန့်သတ်လိုက်သည်ဟု ကုန်သည်များက ပြောသည်။
မြ၀တီကြက်သွန်ဒိုင်ကြီးတခုက “အရင်လို ထိုင်းဘက်ကို ခိုးဂိတ်ကနေ ပို့လို့မရတော့ဘူး။ သူတို့ပြောတာက ပြည်တွင်းစားသုံးမှု ပြဿနာမဖြစ်ရအောင် ကုန်သည်တွေမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ခဏနားထားရမယ်” ဟု ပြောသည်။
မြ၀တီမြို့တွင် မွန်ဒိုင်အပါအ၀င် ဒိုင်ကြီး (၆) ခုရှိပြီး မွန်ဒိုင်တခုသာလျှင် ကြက်သွန်နီများကို ထိုင်းဘက်သို့ ဂျူတီဆောင်ကာ တင်ပို့နေသော်လည်း ဒိုင်အများစုမှာ တွက်ခြေပိုကိုက်သည့် အောက်လမ်းမှသာ ထိုင်းဘက်သို့ ပို့ဆောင်ကြသည်ဟု ကုန်သည်များက ပြောသည်။
မြ၀တီရှိဘုရင့်နောင်ဈေးမှ ဆိုင်ရှင်တဦးက “ကြက်သွန်နီအလုံးကြီးတပိဿာကို (၁,၃၀၀) ကျပ်ရှိတယ်။ အရင်လတွေက (၇၀၀) ပဲ ရှိတယ်။ လက်ကားဆိုင်ဆိုတော့ ၀ယ်အားကျမကျ ချက်ချင်းသိတယ်။ ဈေးကြီးတော့ လူတွေလည်း အသုံးနည်းသွားတယ်” ဟု ပြောသည်။
မဲဆောက်ဘက်တွင် ဈေးကွက်အတွင်း ယခင်ကဲ့သို့ အရည်အသွေးကောင်းသည့် ကြက်သွန်နီများ ၀င်ရောက်မှုမရှိဘဲ အလုံးငယ်များကို တပိဿာလျှင် ဘတ် (၄၀) ဖြင့် ရောင်းချလျက်ရှိသည်။
မဲဆောက်ကြက်သွန်နီပွဲရုံမှ ထိုင်းမန်နေဂျာက “ဒီလိုဈေးထိုးတက်တာတွေ အရင်ကလည်းကြုံဖူးတယ်။ နှစ်တိုင်းတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဈေးမြင့်တော့ ပစ္စည်းကို ထက်ဝက်လောက် လျှော့မှာရတယ်။ အရင်က တနေ့ကို အနည်းဆုံး (၁၀) တန်လောက် ဘန်ကောက်ကိုပို့တယ်။ အခုလကစပြီး ရက်ခြားပဲပို့ရတော့တယ်။ ဈေးကခေါက်ချိုးနီးနီး တက်သွားလို့ဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကလည်း မြန်မာကြက်သွန်နီ ဈေးအဆမတန်မြင့်တက်ခဲ့ရာ မြ၀တီဘက်တွင် တပိဿာ ကျပ် (၁,၈၀၀) အထိဖြစ်ခဲ့ပြီး ထိုင်းဘက်ခြမ်းမဲဆောက်တွင် တပိဿာ (၅၅) ဘတ်အထိ ဖြစ်ခဲ့သည်။
မြန်မာကြက်သွန်နီများ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှ တင်သွင်းရာတွင် မြ၀တီ-မဲဆောက်လမ်းကြောမှ လစဉ် တန်ချိန် (၁,၅၀၀) ခန့် အနည်းဆုံးရှိသည်ဟု ထိုင်းကြက်သွန်နီပွဲရုံက ပြောသည်။
မြ၀တီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းမှတ်တမ်းများအရ ယမန်နှစ် ဒီဇင်ဘာတလအတွင်း ထိုင်းဘက်သို့ ကြက်သွန်နီ တန်ချိန် (၂,၀၀၀)၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄) သိန်းကျော်ဖိုး တင်ပို့ခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
စားသုံးဆီကြောင့် စီးပွားရေးဦးပိုင်နှင့် ဦးတေဇ အချင်းများကြ
Friday, 31 July 2009 16:51 ဟိန်းဇော် .မြန်မာနိုင်ငံတွင် စားသုံးဆီ တင်သွင်းခွင့် အပြည့်အဝ ရရှိထားသော စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမိတက်က မကျေနပ်သောကြောင့် ထူးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးတေဇ၏ စားသုံးဆီ တင်သွင်းခွင့်များ ပိတ်ပင် ခံခဲ့ရပြီး နစ်နာဆုံးရှုံးမှု ကြီးမားနေကြောင်း ၎င်း ကုမ္ပဏီအသိုင်းအဝန်းမှ ကြားသိရသည်။
ဦးတေဇသည် ၎င်း တည်ထောင်ထားသည့် ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် FC အသင်း ရပ်တည်ရန် ယခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပမှ စားသုံးဆီများ ပိုမို တိုးချဲ့တင်သွင်းလျက် ရှိသည်။
သို့ရာတွင် စစ်အစိုးရ၏ စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမိတက် လုပ်ငန်းကို ထိခိုက်လာသည်ဟု ယူဆကာ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီး ဌာနနှင့် ဦးပိုင် ပူးပေါင်း၍ ထူး ကုမ္ပဏီက တင်သွင်းသည့် စားသုံးဆီ အမှတ်တံဆိပ်များကို စားသုံးရန် မသင့်ကြောင်း ကြေညာပြီး တင်သွင်းခွင့် ပိတ်လိုက်ကြောင်း ထူး ကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောသည်။
“ကိုတေဇက ဒီဘောလုံးအသင်းအတွက် ဆီက ရမယ့်အမြတ်ငွေထပ်ထည့်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာ။ ဦးပိုင်က သူ့ လုပ်ကွက်ပျောက်မှာစိုးလို့ တင်သွင်းတဲ့ ဆီကို စစ်ဆေးအောင် တွန်းအားပေးခဲ့တာ။ ဆီတင်သွင်းခွင့် ပိတ်ခံရလို့ ကိုတေဇ ဒေါသထွက်နေတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနက ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာထဲတွင် မလေးရှား နိုင်ငံထုတ် ကျောက်ပုစွန်နှစ်ကောင် (star oil) အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ကျောက်ပုစွန် တကောင် အမှတ်တံဆိပ်၊ ရေနဂါး(twin sea horse) အမှတ်တံဆိပ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ငါးကြော် အမှတ်တံဆိပ် (pamola brant) များသည် ဓာတုဓာတ်ခွဲ စစ်ဆေးချက်အရ စားသုံးဆီ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိ၍ စားသုံးရန် မသင့်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
စားသုံးဆီ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိဟု ကျန်းမာရေးဌာနက သတ်မှတ်သော အဆိုပါ ဆီ အမှတ် တံဆိပ် များ ကို ဦးတေဇက တင်သွင်းနေပြီး ဆီတင်သွင်းခွင့် ပိတ်ခံလိုက်ရ၍ စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမိတက်နှင့် အချင်း များနေကြောင်း ဦးပိုင် လီမိတက်မှ ဆီကုန်သည် တဦးက ပြောသည်။
“နှစ်ဘက်စလုံးက လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ အပြည့်သုံးခွင့်ရထားတဲ့ သူတွေချည်းပဲ။ ပွဲကတော့ ကြည့်ကောင်းမှာ။ ဦးတေဇက သူလုပ်ငန်းပြန်လုပ်ခွင့်ရအောင် လုပ်မှာပဲ။ ဦးပိုင်ကလည်း သူလက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ ဆီကို ဈေးကွက် ပျက်အောင် လုပ်လို့ ငြိမ်နေမှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ဦးတေဇသည် ထူး ကုမဏီကို တည်ထောင်ပြီး အဲပုဂံ လေကြောင်း လိုင်းဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ပျံသန်းခြင်း၊ ဟိုတယ် လုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပို့ကုန် သွင်းကုန် လုပ်ငန်း၊ သစ်လုပ်ကွက် ၊ စက်သုံးဆီ၊ စားသုံးဆီ စသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရရှိထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့် အများဆုံး ရရှိထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအနက် တဦးအပါအ၀င်ဖြစ်ကာ လက်ရှိတွင် ငွေကြေး ကျပ် သိန်း ထောင်ချီ အကုန်အကျ ခံပြီး ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် FC ကြေးစားဘောလုံး အသင်းကိုတည်ထောင်ထားသူ ဖြစ်သည်။
အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ၆ ဦး ပြန်လွတ်လာ
သောကြာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 31 ရက် 2009 ခုနှစ် 20 နာရီ 14 မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ယမန်နေ့ညက ဖမ်းဆီးခံခဲ့ကြရသူများ အနက်မှ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ၆ ဦး ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန် ဒဂုံမြို့သစ်မှ မသက်သက်အောင်၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်မှ ကိုထိန်ဝင်းနှင့် ဒေါ်ခင်ဝင်းကြည်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်နေ အောင်လံအမတ် ဦးညွန့်လှိုင်၊ ဒေါ်နော်အုန်းလှ၊ မခင်မြတ်သူတို့ ပြန်လွတ်လာကြောင်း အဖွဲ့ချုပ် ဗဟို ပြန်ကြားရေးဌာနမှ ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောသည်။
ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စီရင်ချက် ချမည်ဟု ယနေ့တွင် လျာထားခဲ့ရာမှ ဆူပူအုံကြွမည်ကို စိုးရိမ်ပြီး လက်ဦးမှု ရယူသည့် အနေဖြင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ အန်အယ်ဒီအဖွဲ့ဝင်အချို့ကို ယမန်နေ့ညက ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ စုစုပေါင်း ၃၀ ဦးခန့်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
လွတ်မြောက်လာသူများမှ တဦးဖြစ်သူ တောင်ဒဂုံမြို့နယ် လူငယ်တာဝန်ခံ (၃) ကိုထိန်ဝင်းကလည်း “ဒီနေ့ ကျနော် ၁၂ နာရီ အိမ်ကို ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ ကျနော့်ကို မေးတယ်။ ဒီနေ့ ၃၁ ရက်နေ့ ဘာလုပ်မလဲ။ ဆန္ဒပြဖို့ အစီအစဉ်ရှိလား။ ၈ လေးလုံးနေ့မှာ ဘာလုပ်မလဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ချခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲလို့ ဆိုတာတွေ မေးတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ကိုထိန်ဝင်းအား ယမန်နေ့ ည ၁၂ နာရီခန့်တွင် ကျေးရွာကောင်စီ - ရယက ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရာအိမ်မှူးနှင့် အက်စ်ဘီ ဒုရဲအုပ် ကိုအေးသိန်းက မေးမြန်းစရာရှိသည်ဟုဆိုကာ နေအိမ်မှ တောင်ဒဂုံရဲစခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဒုရဲမှူး ဦးစိုးသိန်းက ကားဖြင့် ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ပြည်ထဲရေးရုံးသို့ ပြောင်းရွှေ့ခေါ်ဆောင်သွားကာ ၂ နာရီခန့်ကြာ စစ်ဆေး မေးမြန်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဒေါ်ခင်ဝင်းကြည်သည်လည်း အဆိုပါနေရာ၌ပင် စစ်ဆေး မေးမြန်းခြင်း ခံရကြောင်း ကိုထိန်ဝင်းက ပြောသည်။
စစ်ကြောရေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သမျှကို ပြင်ပသို့ ပြန်လည်မပြောရန် ဝန်ခံကတိ လက်မှတ် ထိုးခဲ့ရသည်ဟုလည်း သူက ပြောသည်။
Friday, 31 July 2009 13:30 ကိုစိုး .မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရင်ဆိုင်နေရသည့် အမှုအား ယနေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်ရန် အစီအစဉ်ကို လာမည့် သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့သို့ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းကပြောသည်။
“ဒီနေ့ကတော့ ရုံးချိန်းသက်သက်ပဲ၊၁၀ နာရီရုံးတက်ပြီးတာနဲ့ တရားသူကြီးဦးသောင်းညွန့်က ရုံးချိန်းတဲ့အကြောင်း ကြေညာတယ်၊ အကြောင်းပြချက်က ဒီအမှုမှာ ဥပဒေပြဿနာကို စဉ်းစားသုံးသပ်ရန် ရှိနေတဲ့ အတွက်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ၁၁ ရက်နေ့မနက် ၁၀ နာရီကို ချိန်းပါတယ်”ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်း က ဧရာဝတီ သို့ ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းသည် နိုင်ငံတကာ၏ သဘောထား ဖိအားများကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားနေခြင်း ဖြစ်နိုင် သည် ဟု ယူဆ၍ ရကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သည့် အင်္ဂါနေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှုအား ၂ ဘက်အပြီးသတ်လျှောက်လဲချက်များကို ကြားနာပြီး နောက် အင်းစိန်ထောင်တွင်း တရားရုံးက ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် စီရင်ချက်ချမှတ်ရန် စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်း ယခုကဲ့သို့ ထပ်မံ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်း စီရင်ချက်ချမည့် ရက်ကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် တရားရုံးသို့ နေပြည်တော်ရှိ စစ်အစိုးရအကြီးအကဲက ညွှန်ကြားခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သေးသော သတင်းများအရ သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ စီရင်ချက်ချမည့် ရက်ကို ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းသည် သြဂုတ်လအတွင်း ကျရောက်မည့် ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို ရှောင်ရှားလို၍ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု လေ့လာသူများက သုံးသပ်နေကြသည်။
ယနေ့တရားခွင်သို့ နိုင်ငံခြားသံရုံး အရာရှိများကို လာရောက်ခွင့်ပြုသည်ဟုလည်း သိရသည်။
အင်းစိန်ထောင်နှင့် အနီးတဝိုက်တွင်လည်း လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့ဝင် ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောသည်။
“အခု အင်းစိန်ခုံးတံတားကို ပိတ်ထားတယ်၊ လူရော ကားရော သွားလို့မရဘူး၊ ကျနော် ရောက်နေတဲ့ ဘက်က ဒီဘက် ပန်းခြံဘက်မှာ၊ ကြံ့ဖွံ့လိုလို စွမ်းအားရှင်လို လူတွေကလည်း ၁၀၀ ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်၊ သူတို့က ကျနော်တို့ လူတွေကို ဓာတ်ပုံတွေ ဘာတွေရိုက်နေတယ်၊ အခုပြောနေချိန်မှာပဲ ရဲ ကား ၇ စီးလောက် လှည့်လာတယ်၊ ကားခေါင်းပေါ်မှာလည်း စက်သေနတ်ကို အသင့် ထောက်ပြီးတင်ထားတာတွေ့ရတယ်”ဟု ၎င်း က ပြောပြသည်။
ယင်း တရားစီရင်ရာ အင်းစိန်ထောင်အနီး ဝန်းကျင်သို့ NLD အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်နယ် နှင့် တိုင်းမှလွှတ်တော်အမတ် တချို့၊ မြောင်းမြဘဆွေ၊ အမျိုးသားရေး ဦးဝင်းနိုင် နှင့် အယ်ဒီတာ ကဗျာဆရာ ဖျာပုံနီလုံဦး တို့အပါအဝင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံသော လူပရိသတ် ၃၀၀ ဝန်းကျင်ခန့် လာရောက်ကြသည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ဆရာ ဦးဝင်းတင်ကလည်း လမ်းလျှောက်ရတာ မောနေလို့တဲ့ ဆိုက်ကားနဲ့ ထွက်လာချင်တယ်လို့ပြောတယ်၊ ပေါက်တောဘက်မှာတော့ ဦးအေးသာအောင်တို့ ရှိမယ်”ဟုလည်း သူ က ဆိုသည်။ အင်းစိန် ထောင်အနီး ပေါက်တော ဘက်တွင်လည်း လုံထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များစွာဖြင့် လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေဂုံတိုင်ရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်သော NLD ပါတီ ရုံးချုပ်အနီးတွင် လည်း ရဲကား ၁၀ စီးခန့်၊ လုံထိန်း၊ စွမ်းအားရှင်တို့ ဖြင့် လုံခြုံရေး တင်းကျပ်ထားကြောင်း ပြည်တွင်း သတင်း ထောက် တဦး ကပြောသည်။
“ရုံးနားက မူလတန်းကျောင်းအနားမှာ ရဲကား ၅ စီး ၊ ကျောက်ဆည် ဓမ္မာရုံနားမှာ ၄ စီး ရှိတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောပြ သည်။
ယမန်နေ့ ညဘက်ကလည်း NLD အဖွဲ့ဝင် ၂၀ ခန့်ကို အာဏာပိုင်များက နေအိမ်များမှ လာရောက် ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။
“မနက်ဖြန် ဒေါ်စု ရုံးချိန်းသွားမှာလားလို့ မေးတယ်၊ သွားမယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေကို ဖမ်းသွားတာ”ဟု အထက်ပါ သတင်းထောက်ကပြောသည်။
ဒေါ်ခင်ဝင်းကြည်(ဒဂုံမြို့သစ်) ၊ မထက်ထက်အောင် ဒဂုံမြို့နယ် လူငယ်၊ မကွေးတိုင်း တောင်တွင်းကြီး မြို့နယ်မှ ဦးမောင်စိုး၊ ဦးပါလေး၊ ဦးကျော်နိုင်၊ ရေနံချောင်းမှ ကိုမြင့်ငွေ၊ ကိုတင့်လွင်၊ ကိုသန်းအောင်၊ ဆင်ဖြူကျွန်းမှ ကိုနေမျိုးကျော်၊ မင်းဘူးမြို့နယ်မှ ဦးသောင်းစိုး၊ ရန်ကုန်တိုင်း တောင်ဒဂုံ မှ ကိုထိန်ဝင်း၊ သာကေတ မှ ကိုနေလင်းစိုး၊ မင်္ဂလာဒုံ မှ မခင်မြတ်သူတို့ အပါအဝင် NLD အဖွဲ့ဝင် ၂၀ ခန့် ယမန်နေ့ညက ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရ ကြောင်း NLD ကလည်း အတည်ပြု ပြောဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၎င်း၏အိမ်သို့ တိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်ခဲ့သော ဂျွန် ၀ီလျံ ယက်ထော အမှုနှင့် ပတ် သက် ပြီး အာဏာပိုင်များက မေလ ၁၄ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အကျယ်ချုပ်ထားရာနေအိမ်မှ အင်းစိန်အကျဉ်း ထောင်သို့ ခေါ်ဆောင်၍ တားဆီးမိန့် ချိုးဖောက်မှု ပုဒ်မ ၂၂ ဖြင့် တရားစွဲဆိုလိုက်ကာ မေလ ၁၈ ရက်နေ့မှ စတင် ၍ အစိုးရ တရားလိုပြ သက်သေများကို ဆက်တိုက် စစ်ဆေးခဲ့ပြီး မေလ၂၆ နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပုဒ်မ ၂၂ အရ ပြစ်မှု ထင်ရှားပါက ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ် အထိ ကျခံရနိုင် ကြောင်း သိရသည်။
Friday, 31 July 2009 17:50 ဘစောတင် .ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာ့အရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ ၂ဝ ကျော်သည် ယနေ့ နံနက်က မြန်မာသံရုံးရှေ့သို့ သွားရောက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တရားစွဲဆိုထားခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် တောင်းဆို ဆန္ဒပြကြသည်၊
ရန်ကုန်မြို့တွင်လည်း ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူများ ဆန္ဒပြကြမည်ကို အစိုးရက ကြိုတင် တားဆီးသည့်အနေဖြင့် အဓိကရုဏ်း နှိမ်နင်းရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် အများအပြားကို လမ်းပေါ်တွင် ချထားသည်။ ယမန်နေ့ညကလည်း ရန်ကုန်တိုင်း နှင့် မကွေးတိုင်းမှ NLD အဖွဲ့ဝင် ၃၀ ၀န်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းလိုက်သည်။ အမှုကို စီရင်ချက် ချရန် ပြန်လည် သတ်မှတ်ထားသော သြဂုတ်လသည် ရှစ်လေးလုံး လူထု အုံကြွမှု ၂၁ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် ကာလလည်း ဖြစ်သည်။
သောကြာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 31 ရက် 2009 ခုနှစ် 19 နာရီ 47 မိနစ်
ရွှေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ မြောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ - ကေအိုင်အိုတို့ တရုတ်နယ်စပ်ရှိ ကေအိုင်အို ဋ္ဌာနချုပ် လိုင်ဇာမြို့တွင် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက လာရောက်သည်။
ယခုလ ၂၉ ရက်နေ့က မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းသည် ကချင် ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် ယခုလို လိုင်ဇာသို့ ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်သည်။ နံနက် ၇ နာရီကျော်မှ ညနေ ၂ နာရီကျော်အထိ လိုင်ဇာမြို့ရှိ လိုင်ဇာဟိုတယ်တွင် ကေအိုင်အို ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံကြောင်း မျက်မြင်ဒေသခံများက ပြောသည်။
“မနက် ၆ နာရီ ၁၀ မိနစ်လောက်မှာ ပထမဆုံး ဖိုးဝီးကားတစီးနဲ့ အီရိုးလက်ကား ၂ စီး ရှေ့ပြေးအဖွဲ့ ရောက်လာတယ်။ ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်လောက်မှ တိုင်းမှူးက သူ့ရဲ့ ပါရာဒိုကားနဲ့ ရှေ့ပွိုင့် ဖိုးဝီးတစီးနဲ့ အတူလာတယ်။ ၁၀ နာရီခွဲလောက်မှာတော့ ဖိုးဝီးကား ၇ စီး ပွိုင့် ၅ တွေ တင်ထားတယ်။ သေတ္တာတွေလည်း တင်ထားတယ် အားလုံးဆို ၁၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက် ရှိမယ်” ဟု တွေ့မြင်လိုက်သူ တဦးက ပြောသည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရန် နအဖက ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလကတည်းက ကေအိုင်အိုကို အဆိုပြုခဲ့သော်လည်း လက်မခံခဲ့ဘဲ၊ ယခုလ ၈ ရက်မှ ၁၁ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှူးနှင့် ကေအိုင်အို တွေ့ဆုံပွဲတွင် နယ်ခြားစောင့်တပ် - BGF အစား ကချင်ဒေသ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ - KRGF ဖွဲ့စည်းရေးကို တင်ပြ တောင်းဆိုခဲ့သည်။
မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲခန့်တွင် တိုင်းမှူးနှင့် အဖွဲ့သည် လိုင်ဇာမြို့ ဝယ်ကြိုင်ရပ်ကွက်ရှိ ကေအိုင်အို ဆေးရုံသို့ လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ညနေ ၃ နာရီခန့်တွင် လိုင်ဇာမှ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားသည်။
Friday, 31 July 2009 18:01 ရန်ပိုင် .ပြည်သူများ စားသုံးရန် မသင့်သည့် ဓာတုဗေဒနည်းနှင့် ပြုလုပ်ထားသော ကြက်ဥအတုများ နယ်စပ်ဒေသမှ တဆင့် ၀င်ရောက်နေသည်ဟု ထူးခြားးသည့် သတင်းအား ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့ထုတ် စစ်အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
အိန္ဒိယရှိ မြန်မာအလုပ်သမားများ ဖမ်းဆီးခံရ
Friday, 31 July 2009 18:24 ဇာနည်မာန် .အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ် မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ရှိ မြန်မာအလုပ်သမား အနည်းဆုံး ၂၁ ဦးကို တရားမ၀င် နေထိုင်မှုဖြင့် အိန္ဒိယရဲများက ယမန်နေ့ညတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ မြန်မာအလုပ်သမားများမှာ အိန္ဒိယတွင် နေထိုင်ခွင့် လက်မှတ် တစုံတရာမရှိသောကြောင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး သူတို့ကို ပြည်နယ်မြို့တော် အိုက်ဇောရှိ တရားရုံးတွင် ရုံးတင်စစ်ဆေးကာ ထိုက်သင့်သော ပြစ်ဒဏ်များချ မှတ်မည်ဟု ပြည်နယ်ရဲဌာနမှ အရာရှိတဦးက ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
“သူတို့ကို ဒီမှာ တရားဝင် နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်တွေ မရှိလို့ဖမ်းထားတာပါ၊ အခုသူတို့ကို တရားရုံးမှာပို့ထားပါ တယ်၊ တရားရုံးက သူတို့ကို မြန်မာပြည်ကို ပြန်ပို့ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ဒဏ်ငွေဆောင်ခိုင်းဖို့ တခုခု အမိန့်ချမှတ်ပါ လိမ့်မယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူ အလုပ်သမားများမှာ ဒဏ်ငွေချမှတ်ခံရပါက အိန္ဒိယ ရူပီး ၅၀၀ မှ ၂၀၀၀ အထိ ပေးဆောင်ရ မည် ဖြစ်သည်။ ဒဏ်ငွေ မဆောင်နိုင်ပါက နယ်စပ်သို့ ပြန်ပို့ခံရခြင်း၊ ထောင်ဒဏ်အနည်းဆုံး ၉ လ အထိကျခံရခြင်း များရှိသည်။
မီဇိုရမ်သို့ ဝင်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား အရေအတွက် မြင့်မားလာသကဲ့သို့ နယ်စပ် ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်း ၀ယ်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် တရားမ၀င် လက်နက်မှောင်ခိုမှုများ၌ မြန်မာတို့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုများ ရှိနေသောကြောင့် တရားမ၀င်နေထိုင်သူများကို အရေးယူခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေသဆိုင်ရာ သတင်းဌာနများတွင် ဖော်ပြကြသည်။
ယမန်နေ့ညနေက မီဇိုရမ်ရှိ မြန်မာပြည်တွင်း ခေတ္တပြန်နေသော မြန်မာ အမျိုးသမီးတဦး ငှားရမ်းနေထိုင်သည့် အိမ်တအိမ်ကို သက်ဆိုင်ရာက ၀င်ရောက်ရှာဖွေရာတွင် လက်နက်ခဲယမ်းများကို တွေ့ရှိခဲ့သည်ကို သတင်းဌာန များတွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသော လက်နက်များမှာ M-16 သေနတ် ၈ လက်၊ ၉ မမ ပစ္စတို ၁ လက်၊ လက်ပစ်ဗုံး ၄ လုံး နှင့် လမ်းလျှောက်စကားပြောစက် ၅ ခုတို့ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အမျိုးသမီး၏ အမည်နှင့် အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက် များ ကို ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။
အဆိုပါ ကိစ္စကြောင့် မြန်မာလုပ်သားများကို ဖမ်းဆီးခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယက်ကန်းလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများအနေဖြင့် ယူဆနေကြသော်လည်း ရဲအရာရှိကမူ ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုသွားသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်များက ယခုလို အလုပ်သမားများကို ဖမ်းဆီးခြင်းမျိုး မရှိခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်တွင်မှ ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးခြင်းများ ရှိလာသည်ဟု မြန်မာ ယက်ကန်းလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တဦးက ဆိုသည်။
“ဒီနှစ်ထဲမှာ ဒါနဲ့ဆိုရင် ၃ ကြိမ်ရှိပြီ၊ သူတို့ ဒီမှာ ရဲတွေပြောတာတော့ အစိုးရရဲ့အမိန့်နဲ့လို့ပြောတယ်၊ သူတို့က မှောင်ခို ကုန်ကူးတဲ့ နိုင်ငံခြားသားကို ဖမ်းခိုင်းတိုင်း ဒီယက်ကန်းသမားတွေကိုပါ လာလာဖမ်းကြတယ်”ဟု အဆိုပါ ယက်ကန်းရုံပိုင်ရှင်က ဧရာဝတီကိုပြောသည်။
မီဇိုရမ်ပြည်နယ်တွင် လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများအတွက် အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ကဲ့သို့ စာရွက်စာတမ်း များကို အစိုးရမှ တရားဝင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းမရှိ၍ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသမှ အာဏာပိုင်များနှင့် ညှိနှိုင်း၍သာ နေထိုင်ခွင့် များ ရယူထားကြရသည်။
“သူတို့နေထိုင်ဖို့ ပါမစ်လိုဟာမျိုးက တရားဝင်ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီလိုပဲ သူတို့ တရားရုံးကို သွားပြီးတော့ အလုပ်သမားပုံနဲ့ အလုပ်ရှင် ထောက်ခံစာနဲ့သွားပြီး နားလည်မှုနဲ့လုပ်ထားတာပေါ့၊ အခု အစိုးရ အသစ်တက်လာ တော့ အရင်နှစ်တွေက လုပ်ထားတဲ့ဟာကို အသစ်ပြန်လုပ်ရမှာလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်၊ ဒီမှာက တခြား ထိုင်းတို့ မလေးရှားတို့မှာလို သီးသန့် မှတ်ပုံတင် လုပ်ပေးတာမျိုးတွေ၊ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာ မရှိတော့ ဒီလိုဖြစ်လာရင် အလုပ်သမားတွေရော အလုပ်ရှင်တွေရော တော်တော်ဒုက္ခရောက်ကြပါတယ်”ဟု သူက ဆို သည်။
ယခုလို ဖမ်းဆီးမှုများ ရှိလာသောကြောင့် ယက်ကန်းရုံတချို့ရပ်နားထားရပြီး ယက်ကန်း လုပ်သားများမှာလည်း ပုန်းရှောင်နေကြရသောကြောင့် စားဝတ်နေရေး ထိခိုက်ရသည်ဟု ပုန်းရှောင်နေရသည့် ယက်ကန်းသမလေး မသေးသေးက ပြောပြသည်။
“အရင်တခါက အဖမ်းခံထားရတော့ ကြောက်တာပေါ့နော်၊ အခုလည်း မိသွားမှာစိုးလို့ မပြန်ရဲသေးဘူး၊ အခုလည်း ဖုန်းစောင့်နေတာ၊ အိမ်ရှင်က အာမခံ မပေးနိုင်တော့ ပုန်းခိုင်းထားလို့ ကျမတို့ ပုန်းနေတာ၊ ကျမတို့ တရုံလုံးပေါ့၊ အယောက် ၂၀ လောက်ရှိတယ်၊ အလုပ်ကတော့ ပျက်တာပေါ့၊ အလုပ်ပျက်တော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး”ဟု သူက ဆိုသည်။
ပြည်တွင်း၌ စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်းမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ဘက် အိန္ဒိယ နယ်စပ် မီဇိုရမ် ပြည်နယ်အတွင်း ဝင်ရောက်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသားပေါင်း ၅ သောင်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီး ရက်ကန်းခတ်ခြင်း၊ ရွှေပန်းထိမ် လုပ်ငန်း၊ လက်သမား၊ အိမ်ဖော်၊ တောင်ယာ၊ လမ်းဖောက်လုပ်ငန်းများနှင့် အခြား ကြုံရာ ကျပန်း အလုပ်များ လုပ်ကိုင်နေကြသည်။
ဒေါ်စုအမှု စီရင်ချက်ချမည့်ရက် သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်ကို ရွှေ့ဆိုင်း
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားစွဲဆိုထားတဲ့ အမှုအတွက် ဒီကနေ့ စီရင်ချက်ချဖို့ ချိန်းဆိုထားပေမယ့် တရားသူကြီးက ရုံးချိန်းထပ်ပေးပြီး စီရင်ချက်ချမယ့်ရက်ကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ အမှုကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ရာ ဥပဒေရေးရာ ပြဿနာတွေ ရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီး တရားရုံးက အကြောင်းပြတယ်လို့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေကြီးတဦးက ပြောပါ တယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့တော်ကနေ ၀ိုင်းတော်သား ကိုကျော်ကျော်သိန်းက သတင်းပေးပို့ထား ပါတယ်။
ဒီကနေ့မနက် ၁၀ နာရီမှာ စီရင်ချက်ချမယ် ဆိုပြီးတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့မှာ တရားသူကြီးက ရုံးချိန်း ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီကနေ့မှာတော့ စီရင်ချက်မချဘဲ ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေတဦးဖြစ်သူ ဦးဉာဏ်ဝင်းကပြောပါတယ်။
"ဒီကနေ့ အမိန့်မချဘူးခင်ဗျ။ ၁၁ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီကို ရွှေ့ပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ ဒီအမှုကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ရာအတွက် ဥပဒေ ပြဿနာတွေ ရှိနေတယ်၊ အဲဒါတွေကို သုံးသပ်နေရလို့ ဆိုပြီးတော့ အကြောင်းပြပါတယ်။"
ဘယ်လိုဥပဒေပြဿနာတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာကိုတော့ တရားသူကြီးက တိတိကျကျ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မပြောခဲ့ပါဘူး။ နေအိမ် ထဲကို တိတ်တဆိတ် ရေကူးဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား မစ္စတာ ဂျွန် ၀ီလီယမ် ယက်တော ကို အဲဒီအချိန်က နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်ခံခဲ့တာဟာ အကျယ်ချုပ် ချထားတဲ့ တားဆီးမိန့်ကို ဖောက်ဖျက်တာ ဆိုပြီးတော့ တရားလိုတွေဘက်က စွပ်စွဲထားပါတယ်။ ဒီလိုစွပ်စွဲတာမှာ သူတို့ဘက်က အသုံးပြုတဲ့ဥပဒေတွေဟာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့ ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ အခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်တွေဖြစ်တာကြောင့် အကျုံးမ၀င်ဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ ဦးဉာဏ်ဝင်းတို့ ဘက်က ပြန်ပြီး ချေပထားတာပါ။ အခု တရားရုံးကပြောတဲ့ ဥပဒေပြဿနာတွေဆိုတာ အဲဒီလိုအချက်တွေ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းကပြောပါတယ်။
"ကျနော်တို့မြင်တဲ့ ဥပဒေပြဿနာကတော့ ၁၉၇၄ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေ သုံးလို့ရမရရယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ဒီအမှုဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မှာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကတည်းက ထိန်းသိမ်းခဲ့ခြင်းဟာ တရားဝင်မှု ရှိမရှိ ဆိုတာရယ်၊ ဒီပြဿနာ ၂ ခု ရှိနေတယ်လို့တော့ ကျနော်တို့ဘက်က မြင်တာပေါ့။ ဥပဒေရေးအရ အခု ထ်ိန်းသိမ်းတာတွေက တရားမ၀င်ဘူး။ တရားမ၀င်တဲ့အကြောင်းတွေက အဲဒီမှာ ပုဒ်မ (၇) တို့ (၈) တို့၊ အဲဒီဟာတွေနဲ့ နောက်တခါ တားဆီးမိန့်တွေကလည်း တရားမ၀င်ဘူး။ တားဆီးမိန့်ကို ပုဒ်မ (၁၁) အရပဲ လုပ်ရမယ်။ အဲဒါက တယ်လီဖုန်း ဆက်တာ၊ စာဆက်သွယ်တာလုပ်တာ၊ ဒါတွေက တရားမ၀င်ဘူးလို့ ထောက်ပြထားတယ်။"
ဒီအမှုကို စပြီးစစ်ဆေးစဉ်ကတည်းက စွဲချက်တွေဟာ ဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေ ကနေ ချေပလာခဲ့ကြတာပါ။ ဥပဒေရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ အများအပြားကလည်း ဒီအမှုဟာ ဥပဒေနဲ့ မကိုက်ညီဘူးလို့ ဝေဖန် ပြောကြားထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အခုတော့ အမှုကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ ဥပဒေပြဿနာတွေ ရှိနေတယ်လို့ တရားရုံး ကိုယ်တိုင်က ပြောလာပြီမို့ တကယ်ပဲ ဥပဒေ ပြဿနာတွေကြောင့် ဒီကနေ့မှာ စီရင်ချက်မချနိုင်ဖြစ်ရတာပါလား၊ တခြား ဘယ်လိုအကြောင်းတွေများ ရှိနေနိုင်ပါသလဲ။ အရင် အစဉ်အလာတွေ အရကတော့ မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ တရားစီရင်ရေး စနစ်ထဲမှာ နိုင်ငံရေးပယောဂနဲ့ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်တာတွေ ရှိခဲ့ဖူးတာမို့ အခု စီရင်ချက်ချဖို့ ရက်ရွှေ့တာမှာလည်းပဲ နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက် ပါနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်သူ ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးလေ့လာသူတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်သူငြိမ်းပါ။ "ကျနော်တို့ ကြားတာက ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာလကစလို့ စစ်အစိုးရရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေမှာ သူတို့က 'နိုင်လုံ' လို့ ခေါ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးနဲ့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးလား စသဖြင့် ကော်မတီ တခုရှိတယ်။ အဲဒီကနေပြီးတော့ ကိစ္စ တော်တော်များများကို ဆုံးဖြတ်တယ်။ အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိစ္စကလည်း ထောင်ချမလား၊ ရှေ့ကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာက နိုင်ငံရေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဖြစ်တာများတယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။"
ဒီကနေ့ စီရင်ချက်ချမယ်ဆိုတဲ့အချိန် မတိုင်ခင် မြန်မာစံတော်ချိန် မနက်စောစောမှာ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသန်းဆွေကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။ ဘာအကြောင်း ပြောဆိုကြသလဲ ဆိုတာ တိတိကျကျမသိရပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပဲ တောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ ဒီနေ့တရားခွင်မှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေတွေနဲ့တောင် နောက်ပြီးတော့ ရယ်မောနေခဲ့သေးတယ်လို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိုးဆုံးအတွက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့အနေနဲ့ အကျဉ်းချခံခဲ့ရမယ် ဆိုရင် အချိန်တွေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ဖို့ စာအုပ်တွေ စုဆောင်းထားပါတယ်တဲ့။
"စာအုပ်ကတော့ အများကြီးပဲဗျ။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ် ပါတယ်၊ ပြင်သစ်စာအုပ်ပါတယ်။ မြန်မာစာအုပ်၊ ဘာသာရေး စာအုပ်၊ ပြင်သစ်က စာအုပ်တွေ ပါတယ်။ ပြင်သစ်သမိုင်းစာအုပ် ပါတယ်။ မြန်မာစာအုပ်ကတော့ မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီးရဲ့ 'တဘ၀ သာသနာ' ပါတယ်။ နောက် တရားထိုင်းနည်းတို့ ဘာတို့။ Buddhist Dictionary လည်း ပါတယ်။ ဒါက ကျနော် မှတ်မိသလောက်ပေါ့။ ဒီထက် အများကြီး များပါတယ်။"
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတဦးဖြစ်သူ ဦးဉာဏ်ဝင်းပါ။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်သက်တမ်း ပြည့်ခါနီးလေးမှာပဲ ဒီအမှုပေါ်ပေါက်လာခဲ့၊ ရုံးတင်တရားစွဲခံရပြီး ထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်ထိ ချမှတ်ခံ ရနိုင်တဲ့အရေးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ ဒီအတွက်လည်း ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအဖွဲ့တို့ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ၀ိုင်းဝန်းတောင်းဆို နေကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသာ လွှတ်ပေးမယ်ဆိုရင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်လာဖို့ အခွင့်အလန်းပွင့်လာမှာ ဖြစ်သလို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်း ပွင့်လာမယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် က ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကတော့ ဒီလို တောင်းဆိုချက်တွေ၊ ကမ်းလှမ်းချက်တွေအပေါ်မှာ အကောင်းမြင် ပြန်တုံ့ပြန်တာမျိုး ခုချိန်ထိ မတွေ့ရသေးပါဘူး။
မနေ့တုန်းက ၀ါရှင်တန်ဒီစီမြို့ တော်က အိမ်ဖြူတော်မှာ သမ္မတ အိုးဘားမားက ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ ဂလိုရီယာ မက်ကာပါဂယ်လ် အာရိုယို (Gloria Macapagal Arroyo) ကို လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာ နှစ်နိုင်ငံကြား အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကို အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ အာရိုယို က မြန်မာနဲ့ မြောက်ကိုးရီးယား နိုင်ငံတို့က လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်မှုနဲ့အတူ ဖိလစ်နိုင်ငံကလည်း ရှိနေပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံသဘောထားတွေ တူညီနေတယ်လို့ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ အာရိုယိုက ပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သမ္မတ သမ္မအိုဘားမားက -
"သံတမန် လမ်းကြောင်းကနေတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် ၂,၁၀၀ လောက်ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ချွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ်ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ သဘောထားကို လူသိရှင်ကြား တစိုက်မတ်မတ် ထုတ်ဖော်ပြောကြား လာနေခဲ့ပါတယ်။ မကြာခင်တုန်းက ကျင်းပခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးတုန်းကလည်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် ကိုယ်တိုင် အခွင့်အရေးရတိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချွင်းချက်မရှိ ပြန်လွတ်ပေးဖို့ သူ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။"
မနေ့တုန်းကလည်း နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှာ ပုံမှန် ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ အီရန် ကယ်လ်လီ (Ian Kelly) က အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သဘောထားကို အခုလို ထပ်ပြီး ပြောဆိုပါတယ်။
မကြာသေးခင်တုန်းကပဲ ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးကပ် ကမ်းခြေမြို့မှာ ကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့ ARF ခေါ် အာရှဒေသတွင်း လုံခြုံရေးစည်းဝေးပွဲမှာ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် က တကယ်လို့ မြန်မာစစ်အစိုးရ အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးမယ် ဆိုရင် အမေရိကန် အစိုးရ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို လုပ်ဖို့အတွက် တံခါးဖွင့်ထားတယ်လို့ စကားကမ်းလှမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးက မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဘက်က ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်လာအောင် ချော့မော့ ကြိုးစားနေသလို တဖက်မှာ အမေရိကန် သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမား ကလည်း မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဖိအားပေးတဲ့အနေနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရ အပေါ် စီးပွားရေးနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးအရ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေ လုပ်ထားတဲ့ အက်ဥပဒေကို သက်တမ်းတိုးပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အမေရိကန်နိုင်ငံထဲကို နောက်ထပ် သုံးနှစ်အတွင်း မတင်ပိ်ု့ရဘူးလို့ တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်စုအမှု စီရင်ချက်အတွက် လုံခြုံရေး တင်းကျပ်
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားစွဲဆိုထားတဲ့ အမှုကို အပြီးသတ် စီရင်ချက်ချမယ့် ဒီနေ့ သောကြာနေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့က အင်းစိန်ထောင်တ၀ိုက်မှာ လုံခြုံရေးကို အထူး တင်းကျပ်ထားပါတယ်။
တရားရုံးက စီရင်ချက်ချလိုက်ရင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ဆန္ဒပြတာတွေ မလုပ်ကြဖို့ မြန်မာစစ်အစိုးရက သတိပေးထားပါတယ်။ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ဖမ်းဆီးထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီး တရားစွဲဆိုထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်အစိုးရက မေလမှာ ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
မေလတုန်းက အမေရိကန် နိုင်ငံသားတဦး သူ့နေအိမ်ခြံဝင်းထဲကို မဖိတ်ခေါ်ဘဲ ၀င်ရောက်ခဲ့တာကို ခွင့်ပြုထားလို့ဆိုပြီး တရားသူကြီးက အပြစ်ရှိတယ်လို့ အမိန့်ချရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် ချခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့နေအိမ်ထဲ ၀င်ရောက်သူလည်း တရားရင်ဆိုင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဆိုးဆုံး အခြေအနေအတွက်လည်း ပြင်ဆင်ထားပါတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် တခြား နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂,၁၀၀ ကို ခြွင်းချက်မရှိ ချက်ချင်း ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက အင်္ဂါနေ့ကပဲ ထပ်ပြီး တိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် တရားစီရင်မှုကို သေချာ စောင့်ကြည့်နေပါတယ်၊ အမေရိကန် ကောင်စစ်ဝန်ကလည်း ဒီတရားခွင်ကို တက်ရောက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်း (Mr. Ban Ki-moon) ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် မြန်မာစစ်အစိုးရက စွဲဆိုထားတဲ့ စွဲချက်တွေကို ပြန်ရုပ်သိမ်းပြီး ခြွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးဖို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ရုံးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးသန်းဆွေကို အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက လွန်ခဲ့တဲ့ နာရီပိုင်းက ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ သူတို့တွေ ဘာအကြောင်း ပြောဆိုသလဲ ဆိုတာတော့ မသိရသေးပါဘူး။
Friday, 31 July 2009 17:15 ဖြိုးကြီး .အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်များကို အာဏာပိုင်များက အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ခေါ်ဆောင်သွားသဖြင့် မိသားစုဝင်များ စိုးရိမ်ပူပန်နေလျှက်ရှိသည်။
ပဌာန်းရွတ်ဆုတောင်းပွဲကို အာဏာပိုင်များ စောင့်ကြည့်
Friday, 31 July 2009 16:52 ဉာဏ်မောင် .ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စွဲဆိုထားသည့်အမှု ရုံးချိန်းနေ့တိုင်း ပြုလုပ်နေသည့် ပဌာန်းရွတ်ဆုတောင်းပွဲကို အာဏာပိုင်များ စောင့်ကြည့်မှုများကြောင့် လူစုခွဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရသည်။
ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက မန္တလေးတိုင်း၊ ညောင်ဦးမြို့ ရွှေစည်းခုံဘုရား၊ သဲပုံစေတီတို့တွင် နှစ်ဖွဲ့ခွဲကာ ဆုတောင်းပွဲများပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း ညောင်ဦးမြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
“ဒီနေ့ ဆုတောင်းပွဲလုပ်ဖြစ်တယ်၊ နှစ်ဖွဲ့ခွဲလုပ်တာ၊ ရွှေစည်းခုံဘုရားဘက်မှာ လုံခြုံရေးက အယောက် ၂၀ လောက် စောင့်ကြည့်နေတာ ရှိတယ်၊ အဲဒါနဲ့ ဆုတောင်းပွဲကို နှစ်ယောက်တဖွဲ့၊ သုံးယောက်တဖွဲ့ ခွဲပြီး လုပ်လိုက်ရတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
သဲပုံစေတီတွင် ပြုလုပ်သည့် ဆုတောင်းပွဲမှာ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး အာဏာပိုင်များဘက်မှ တစုံတရာ နှောင့်ယှက်မှုမရှိကြောင်း မြို့ခံက ဆက်ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆုတောင်းပွဲများပြုလုပ်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များကို အာဏာပိုင်များက နှောင့်ယှက်မှုများ ရှိနေပြီး ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က မန္တလေးမြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် ဆုတောင်းပွဲတက်ရောက်သူတဦးကို စွမ်းအားရှင်များက ဝိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်မှုများ ရှိခဲ့သည်။
စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံခြားသားတဦး နေအိမ်ထဲဝင်ရောက်လာသည့် ကိစ္စဖြင့် အမှုဆင် တရားစွဲဆိုထားပြီး ယနေ့ အမိန့်ချမည်ဟု ချိန်းဆိုထားသည်။
သို့သော် အင်းစိန်းတရားရုံးက ဥပဒေဆိုင်ရာ အချက်အလက်အချို့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ဟု အကြောင်းပြကာ အဆိုပါအမှုကို သြဂုတ်လ (၁၁) ရက်နေ့သို့ ထပ်မံချိန်းဆိုလိုက်သည်။
မုန်းတိုင်းသင့်ဒေသ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ အကျိုးခံစားပိုင်ခွင့်များ မရရှိသေး
Friday, 31 July 2009 14:37 ဉာဏ်မောင် .နာဂစ်ဒေသက ပညာရေးဝန်ထမ်းများ ခံစားပိုင်ခွင့် လစာနှင့် ထောက်ပံ့ကြေးကိစ္စများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ပညာရေးအာဏာပိုင်များက တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးခြင်း မရှိသေးသည့်အတွက် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရသည်။
“အခု တနှစ်ကျော်ပြီ၊ သူတို့ရဲ့ လစာတွေနဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက် မိသားစုတွေကို မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးက ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူး၊ အဲဒါကို သွားပြ်ီး ဆွေးနွေးတဲ့အခါ အဲဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစာကို မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးက အထက်ကို တင်ပေးခြင်းမရှိသေးတာ၊ အလုပ်မအားလို့ပါဆိုပြီး ပြောတယ်” ဟု ပညာရေးဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ အားလုံး လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ အားလုံးတွင် တပြိုင်နက်တည်း လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက်မှ စတင်ပြီး ပြုလုပ်နေသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
ဘူးသီးတောင်မြို့တွင် မြို့နယ်လုံခြုံရေး အစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက်က စတင်ပြီး ပြုလုပ်နေကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးသို့ စကခ ၁၅ မှူး၊ ဗျူဟာမှူးနှင့် ဘူးသီးတောင်-မောင်တောခရိုင် ဥက္ကဌ တို့ အပါအ၀င် ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိများ တက်ရောက်နေသည်ဟု သိရသည်။
အလားတူ စစ်တွေတွင်လည်း လုံခြုံရေး အစည်းအဝေးကို ခရိုင်ရုံးတွင် ပြုလုပ်နေပြီး အဆင့်မြှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများနှင့် အရပ်ဘက် ၀န်ထမ်းများ တက်ရောက်နေကြောင်း စစ်တွေက လာသော သတင်းတွင် ဖေါ်ပြသည်။
ယခုအစည်းအဝေးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ချပါက နိုင်ငံ အနှံ့ ဆူပူမူများ ဖြစ်လာနိုင်သဖြင့် လုံခြုံရေးကို မြို့နယ်အလိုက် တိုးမြှင့်ထားရန် အထက်က ညွန်ကြားချက်အရ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ချပါက နိုင်ငံအတွင်း မငြိမ်မသက်မူများ ဖြစ်လာနိုင်သဖြင့် ဒေါ်စုအမူ စီရင်ချက် ချမည့်နေ့ကို သြဂတ်စ်လ ၁၁ ရက်နေ့သို့ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ယခု လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ပြီ်းပါက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လုံခြုံရေးကို ပိုမို တင်းကျပ်လာနိုင်သည်ဟု စစ်တွေမှ လေ့လာအကဲခတ်သူ တဦးက ပြောသည်။
မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းနေသဖြင့် အမ်းမြို့ရှိနေရာ အတော်များများမှာ ရေမြုပ်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဓိက နေရာ ၆ နေရာကို ရေလွှမ်းမိုးထားပြီး တနေရာစီတွင် အနည်းဆုံး ရေအမြင့်မှာ ၅ ပေခန့်စီရှိသည်ဟု ဒေသခံ တဦးကပြောသည်။
ရေမြုပ်နေသော နေရာမှာ အမ်းမြို့နှင့် ရဲစခန်းကြားရှိ လမ်းဖြစ်ပြီး ရေ ၇ ပေခန့် နစ်မြုပ်နေသည်ဟု သူကပြောသည်။
တခြား ရေမြုပ်နေသော နေရာများမှာ မြို့သစ်နှင့် အမ်းဆေးရုံအကြား၊ အမ်းနှင့် တပ်တောင်အကြား၊ အမ်းနှင့် အမ်းအောက်ရွာအကြားရှိ မိုင်တိုင် ၉၅ နှင့် ၉၆ အကြား နေရာများနှင့် လက်နက် ထိန်းသိမ်းရေး တပ်ရင်းရှေ့ လမ်းများ ဖြစ်သည်။
ရေကျော်မူကြောင့် အမ်းမြို့သစ်နှင့် ဆေးရုံအကြားရှိ ပေ ၁၅၀ အရှည်ရှိ တံတားမှာ ကျိုးပျက်ရန် အနေအထားတွင် ရှိသဖြင့် လူအသွားအလာကို တားမြစ်ထားသည်ဟု ဒေသခံက ပြောသည်။
မျက်မြင်များ၏ အပြောအရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်ရှိ အိမ်ထောင်သည်လိုင်းများလည်း ရေမြုပ်နေပြီး မိသားစုများကို နီးစပ်ရာ စာသင်ကျောင်းများနှင့် အဆောက်အဦးများ ရွှေ့ပြောင်းနေသည်ဟု သိရသည်။
ဇူလိူင်လ ၂၉ ရက်နေ့မှ စပြီး ရေမြုပ်နေခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်ထိ ရေမကျသေးကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ထိုကဲ့သို့ အမ်းမြို့နယ်အတွင်း လမ်းအတော်များများကို ရေလွမ်းမိုးနေသဖြင့် စစ်တွေနှင့် ရန်ကုန် အကြား ကားအသွားမှာ ရပ်ဆိုင်းနေကြောင်း သိရသည်။
သောကြာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 31 ရက် 2009 ခုနှစ် 12 နာရီ 49 မိနစ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စီရင်ချက်ကို သြဂုတ် ၁၁ သို့ထပ်မံချိန်း
Kaowao ဇူလိုင် ၃၁၊၂၀၀၉။
ရန်ကုန်(ဇူလိုင်- ၃၁)။ ။ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဥပဒေဖေါက်ဖျက်မှူဖြင့် အင်းစိန်အထူးတရားရုံးတွင် အမှု ရင်ဆိုင်နေရသူ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကို ယနေ့တွင်အမိန့်ချမှတ်ရန် စစ်အစိုးရတို့ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ ယနေ့ ၁၀ နာရီခန့်၌ ယင်းအထူးတရားရုံးမှ လာမည့်သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့သို့ အမိန့်ချမှတ်ရန်ရက်ထပ်မံရွေ့ဆိုင်း လိုက်ကြောင်း ရန်ကုန် NLD အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောကြားနေသည်။
“ဥပဒေကြောင်းအရ မရှင်းလင်းလို့တရားသူကြီးများပြန်လည်သုံးသပ်ကြရန်” အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ယခုကဲ့သို့ အမှုကိုထပ်မံချိန်းဆိုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ရန်ကုန်ရှိ မွန်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက “စစ်အစိုးရက သူတို့ကတဲ့ဇာတ်ထုပ် ကြိုးရှုပ်နေတဲ့အဖြစ်ကို သူတို့ ဟာသူတို့ ပြန်မဖြည်နိုင်တာတွေ ဖြစ်နေကြကုန်ပြီ” ဟုသုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
ယနေ့အထူးတရားရုံကိုိ ၂၈ နိုင်ငံမှ သံတမန်များ လာရောက်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့အချို့နေရာများတွင် ကျောင်းသားများကိုကျောင်းမတက်ခိုင်းပဲ အိမ်ပြန်စေခြင်း၊ အချို့လမ်းများကို ပိတ်ထားပြီး လုံခြုံရေးကိုလည်း အထူးကြပ်မတ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ထို့အတူ နိုင်ငံတကာရှိ စစ်အစိုးရသံရုံးများရှေ့တွင် ထိုတရားရုံးအမိန့်ချမှတ်ချိန်နှင့်တပြိုင်တည်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားများ အချိန်ကိုက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် မြန်မာစစ်အစိုးရက စွဲဆိုထားတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကို ပြန်ရုပ်သိမ်းပြီး ချွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးဖို့ ယနေ့စောစောပိုင်းတွင် ကုလသမဂ္ဂ ရုံးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးသန်းဆွေကို တောင်းဆိုထားသည်။
post by Friday, July 31, 2009
ဒီကေဘီအေမှ နယ်စပ်ရဲလုပ်ရန် သဘောတူထားပြီး နအဖမှ လိုအပ်သော အင်အားထပ်ဖြည့်ဖို့ ညွှန်ကြားတာကြောင့် ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာများတွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇွန်လပိုင်းက ဒီကေဘီအေအဖွဲ့မှ အတင်းအဓမ္မ တပ်သားသစ်များ ကောက်ခံလျက်ရှိပါ တယ်။
နဘူးမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများကို တပ်သားသစ် ၃၀၀ ကောက်ခံထားပြီး ကျေးနယ် တနယ်ကို ၇ ဦး ကနေ ၁၀ ဦးအထိ သတ်မှတ်ထားပြီး မပေးနိုင်ရင် တဦးအတွက် လေးသောင်းကနေ ၂ သိန်း ထိတောင်းပါတယ်။ တပ်သားသစ် များကို ၃ နှစ်အမှုထမ်းရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
နဘူးမြို့နယ်အတွင်းရှိ နောင်တပွဲကျေးနယ်၊ ထီးကလေးကျေးနယ်၊ နောင်ကိုင်းကျေးနယ်၊ ထီးပိုစံကျေးနယ်၊ သကြားချောင်းကျေး နယ်၊ အင်းရှည်ကျေးနယ်တွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ပြီး ဒီကေဘီအေ ၉၉၉ မှ အရာရှိများဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်မြခိုင် နဲ့ ဗိုလ်ဂတုံးတို့က အခုလို တပ်သားသစ်တွေ ကောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီ ကျေးရွာတွေအတွက် ကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ အကြောင်းပြပါတယ်။
ကြက်ဥအတုများ နယ်စပ်ဒေသမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်
Fri 31 Jul 2009, IMNA
ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကြက်ဥအတုများ နယ်စပ်ဒေသမှ တဆင့် ဝင်ရောက်ကာ မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတချို့နှင့် အချို့ပြည်တွင်း ဈေးကွက်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ကာ ရောင်းချလျှက်ရှိကြောင်း ယနေ့ထုတ် အစိုးရပိုင် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
နယ်စပ်ဒေသမှာ ကြက်ဥအတု ဝင်ရောက်သည့်အကြောင်းနှင့် ပတ် သက်ပြီး၊ မြဝတီနှင့် မူဆယ်နယ်စပ် မှာရှိသည့် ကုန်သည်များကို မေးမြန်း ရာတွင် အခုချိန်ထိ ဘာမှ မကြားရသေးကြောင်း ကော့ သောင်းနယ်စပ် ဒေသရှိ မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
“ကျွန်မတို့က ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ထိုင်းကနေ မြဝတီကို နေ့တိုင်းကုန် ပစ္စည်းချနေတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကြက်ဥအတု ပေါ်လာပြီး မြန်မာပြည်ထဲကို သွင်းနေတာကိုတော့ အခုထိ ဘာမှာ မကြားရသေးဘူး” ဟု မြဝတီမြို့ ကုန်သည်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ကြက်ဥအတုများမှာ မွေမြုရေးကြက်များနှင့် ပုံစံတူပြီး ဒေသန္တရကြက်ဥ (အိမ်းမွေးကြက်ဥ) နှင့် အနည်းငယ် ကွဲပြားသည်။ ကြက်ဥအတု၏အကာ ပိုင်းကို ဘင်ဇိုရမ်အက်စစ်၊ ဂျယ်လီ၊ အမည်မသိဓာ တုဆေးမှုန့်၊ ကော်ရည် ပြုလုပ်ရာတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုသည့် ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် မုန့်ဖုတ်ရာ တွင်အသုံးပြုသော ဓာတုပေါင်ဒါများဖြင့် ရောစပ်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ၄င်း၏အ နှစ်ကို အမည်မသိ အဝါရောင်ပေါင်ဒါမှုန့်အား အရည်တစ်မျိုးဖြင့် သမ အောင်မွှေကာ ကယ်ဆီယမ်ကလိုရိုက်ဒ် ထည့်သွင်းဖျော်စပ်ထားသည့် Magic Water ခေါ် အရည်တစ်မျိုးဖြင့် ရောစပ်ပြုလုပ်ထားသည်။
ကြက်ဥအတု၏ အကာနှင့်အနှစ်ကို အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည့် ပလတ် စတစ်ပုံသွင်းခွက်ထဲသို့ လောင်းထည့်ကာ ပုံသွင်းရကြောင်းနှင့် ကြက်ဥ အကာနှင့်အနှစ်တို့အကြား ရောနှောသွားခြင်းမရှိစေရန် Magic Water က ပါးလွှာသောအမြှေးပါးအသွင်ဖြင့် ပိုင်းခြားပေးထားကြောင်း၊ ကြက်ဥအ ခွံကိုမှု ပါရာဖင်းဓာတ်ပါဝင်သော ဖယောင်းနှင့် အမည်မသိ အဖြုရောင် ဓာတုဆေးရည်တစ်မျိုးတို့ ရောစပ်ပြုလုပ်ပြီး ၄င်းအရည်ကို အပိုင်းပုံ သဏ္ဍာန်ပြုလုပ်ထားသော ပလတ်စတစ်ပုံစံခွက်အတွင်း ထည့်ထားသည့် အနှစ်အတုနှင့် အကာအတုများ အပေါ်သို့ လောင်းချ၍အချိန်အ နည်းငယ်ကြာအောင် အခြောက်ခံထားပါက ကြက်ဥအစစ်နှင့် ထပ်တူထပ် မျှ အသွင်သဏ္ဍာန်တူသော ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ကြက်ဥ အတုကို ရရှိသည်ဟု သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၄င်းကြက်ဥအတုနှင့်အစစ်ကို ခွဲခြားရန်အတွက် ကြက်ဥအတုကို ခပ်ပြင်း ပြင်း လှုပ်ကြည့်ပါက အဆန်ချောင် နေသည်ကို တွေ့ရပြီး ကြက်ဥအစစ်က အဆန်ချောင်ခြင်း မရှိဟု သိရသည်။
ကြက်ဥအတု၏အရောင်က ပိုရင့်ပြီး အတု၏အခွံသည် ဖယောင်းနှင့်ပြု လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ပိုမိုအလင်းပြန်ကြောင်း၊ ကြက်ဥများကို ပွတ်ကြည့်လျှင် အတု၏အခွံမျက်နှာပြင်က ပို၍ကြမ်းကြောင်း၊ ကြက်ဥကို ခွဲ၍ကြည့်ပါက အတု၏အနှစ်နှင့်အကာသည် သီးသန့်မနေဘဲ ရော၍သွား ကြောင်း၊ အတု၏အခွံ၌ အမြှေးမပါဘဲ အစစ်၌ အမြှေးပါးကြောင်း၊ ပြုတ် လိုက်ပါက အတုသည် အစစ်ကဲ့သို့ အနှစ်နှင့်အကာသီးခြားမနေဘဲ ရော၍သွားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်ဟု ၄င်းသတင်းစာတွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
အဆိုပါ ကြက်ဥအတုကို လူကိုအဟာရဖြစ်စေသည့် ပရိုတိုန်းဓာတ် မပါ ဝင်ဘဲ ဓာတုပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ကျန်မားရေးကို ထိခိုက်နိုင်သည်ဟု ဆေးပညာရှင်များက သတိပေးထားသည်။
မြန်မာအဏာပိုင်တွေကလည်း ကြက်ဥစားသုံးသူများအနေဖြင့် သတိပြုကြ ရန်နှင့် ၄င်းကြက်ဥအတုများ ရောင်းချနေသည်ကို တွေ့ရှိပါက စည်ပင်သာ ယာရေအဖွဲ့က သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းသတင်စားက ရေးသား ထားသည်။
မိုးလေဝသကြောင့် အမြန်ရေယာဉ် ပြေးဆွဲမှု ရပ်နား
Thu 30 Jul 2009, IMNA
တနင်္သာရီတိုင်း မိုးလေဝသအခြေအနေကြောင့် ၁၀ ရက်ခန့် တနင်္သာ ရီကမ်းရိုးတန်းတွင် ပြေးဆွဲနေသည့်အမြန်ရေယာဉ် ပြေးဆွဲမှုကို ရပ် နားထားခဲ့သည်ဟု အမြန်ယာဉ်လက်မှတ်ရောင်းသူနှင့် နီးစပ်သူက ပြောသည်။
၄င်း၏အဆိုအရ “ဇူလိုင် ၂၀ ကတည်းကပဲ မပြေးဆွဲတာ ဒီနေ့အထိပဲ၊ ရာ သီဥတုကြောင့်ပဲ မိုးလည်းကြီး တယ်လေ” ဟု ဆိုသည်။ အမြန်ယာဉ် ပြေး ဆွဲသည် မပြေးဆွဲသည်ကို ညနေ ၈ နာရီကျော်ခန့်တွင် သိရှိရသည်ဟု လက်မှတ်ရောင်းသူက ပြောသည်။
၄င်းအမြန်ယာဉ်သည် တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်မြို့နယ်မှ ကော့သောင်း မြို့အထိ နေ့စဉ်နှစ်စီး နှုန်းဖြင့် ပြေးဆွဲသည်။ ၄င်းအမြန်ယာဉ်ခရီးသည် ထားဝယ်-မြိတ်-ကော့သောင်းမြို့သို့ တစ်နေ့ခန့် ကြာမြင့်သည်။
ထားဝယ်မြို့မှ ကော့သောင်းသို့ပြေးဆွဲနေသည့်အမြန်ရေယာဉ် ၉ စီးခန့်ရှိပြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်များဖြစ်သည်။ တစ်စီးလျှင် ခရီးသည် ၂၀၀-၄၀၀ ခန့်သယ် ဆောင်နိုင်ပါသည်။
“မိုးသက်လေပြင် တစ်နာရီ ၄၀-၄၅ မိုင်တိုက်ခတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အစိုးရဘက်က မပြေးဆွဲဖို့ ပြောတယ်။ တရားဝင် ကြေငြာချက် ထုတ် ထားတာတော့မဟုတ်ဘူး” ဟု လက်မှတ်ရောင်းသူနှင့်နီးစပ်သူက ပြောသည်။
“ကျနော်လူတွေလည်း ကော့သောင်းကိုလာဖို့ရှိတယ်။ ရေလမ်းက မပြေး ဆွဲတော့ ထားဝယ်မှာ သောင်တင်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ကော့သောင်း ကိုအမြန်ရောက်ဖို့ လေယာဉ်ခရီးစဉ်ရှိရင် လေယာဉ်နဲ့ အမြန်လာ၊ ဒါမ မဟုတ် အမြန်ရေယာဉ်ပြေးဆွဲရင် အမြန်ယာဉ်နဲ့ အမြန်လာဖို့ ပြော ထားယ်။ အခု ကျနော်လူက ထားဝယ်မှာ ရှိနေတုန်းပဲ” ဟု ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုတ်သုံလေ အား ကောင်းရာမှ အားအလွန်ကောင်းလျက်ရှိ သည်။ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင်မူ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် တစ်ခါတရံ မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးမည်။
မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်မြေပြလေသည် တစ်နာရီ မိုင် ၄၀ တိုက် ခတ်နိုင်သည်ဟု မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ခရီး သည်တစ်ဦး၏အဆိုအရ ရေလမ်းသာမက လေကြောင်းလမ်းမှာလည်း မိုးလေဝသသတင်းကြောင့် ရန်ကုန်မှ ထားဝယ်နှင့် မြိတ်မြို့သို့ ဆင်းသက် မည့်လေယာဉ်မှာလည်း ခေတ္တခဏရပ်နားထားပြီး ရန်ကုန် -ကော့သောင်း ခရီစဉ်မှာ ပုံမှန်အတိုင် ပြေးဆွဲလျှက်ရှိသည်။
အမြန်ရေယာဉ်နှင့် လေကြောင်းပြေးဆွဲမှု ယာယီရပ်နားထားသည့်အတွက် ၄င်းမြုိ့တို့တွင် ခရီးသည်များ သောင်တင်နေကြသည်ဟု ၄င်းခရီးသည်တစ် ဦးက ပြောသည်။ ထားဝယ်မှ ကော့သောင်းသို့ အမြန်ရေယာဉ်စရိတ်မှာ တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းမှ ခရီးသည်တစ်ဦးဖြစ်ပါက ကျပ် ၄၅၀၀၀ ပေးရ သည်။ အခြားပြည်နယ်နှင့် တိုင်းမှလာသောခရီးသည်ဖြစ်ပါက တစ်ဦးလျှင် ၇၅၀၀၀ ကျပ်ပေးဆောင်ရပြီး ကော့သောင်းမြို့ဆိပ်ကမ်းသို့ ဆင်းခွင့်ရ ရန်အတွက် အာဏာပိုင်တို့အား ကျပ် ၃၀၀၀၀ အပိုပေးဆောင်ရသည်။
အမြန်ရေယာဉ်နှင့် လေယာဉ်ပြေးဆွဲမှု ယာယီရပ်နားထားသော်လည်း မီးသွေး၊ သစ်များသယ်ဆောင်သည့် လှေနှင့် ငါးဖမ်းလှေများမှာ ဆက် လက်ပြေးဆွဲလျှက်ရှိသည်။
တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးမှု၊ တားဆီးပိတ်ပင်မှု ပိုမိုလုပ်လာ၊ အတက်အဆင်းကားများလည်း နည်းပါးသွား
ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်၊ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်။
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် မူဆယ်(၁ဝ၅)မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်အား တရုတ်ဘက်မှ မှောင်ခို တင်သွင်းနေသည့် ကုန် ပစ္စည်းအား ဖမ်းဆီးမှုနှင့် တားဆီး ပိတ်ပင်မှုများ ပိုမိုလုပ်လာ နေသည်။
ယခုဇူလိုင်လ(၁၁)ရက်နေ့က ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်သို့ လာလည်ပြီးနောက်ပိုင်း ပိုမိုလုပ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ယခင်က တပိုင်တနိုင်ကုန်သွယ်မှုအား အထိုက်အလျောက် ခွင့်ပြုထားခဲ့သည့် လွယ်ဂျယ်မှ တဆင့် ဗန်းမော်သို့ လည်းကောင်း၊ နမ်းခမ်း၊ မန်ဝိန်းကြီးမှတဆင့် ဗန်းမော်သို့ လည်းကောင်း၊ လိုင်ဇာမှ ဗန်းမော်နှင့် မြစ်ကြီးနားသို့ သွားသည့် လမ်းများတွင် တရုတ်ဘက်မှ ကုန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းမှုကို ပိတ်ပင်ထားခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်းများ လုပ်လာ သည်ဟု ကုန်သည်များက ပြောသည်။
လိုင်ဇာဘက်မှ တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်လာသည့် ကုန်ကားများကို လဂျားယန် ဂိတ်မှ အဝင်မခံသည့် အပြင် ခရီးသည်တင်ကားများဖြင့် တပိုင် တနိုင်တင်ဆောင်မှုများကို လည်း ဖမ်းဆီးနေသည်ဟု လိုင်ဇာ ဒေသခံ တဦးက ပြောသည်။
“အခုလလယ်ပိုင်းလောက်ကတော့ ကားတွေ လဂျားယန်ကို ကျော်လို့မရတော့ဘူး။ အလွတ် ဆိုရင် တော့ ရတာပေါ့။ ဟိုင်းလတ်တို့၊ ဖိုးဝီးတို့ ခရီးသည်တင်ကားတွေမှာ ဟိုတုန်းကလို နည်းနည်းပါးပါး သယ်လို့မရတော့ဘူး။ အခုရက်ပိုင်း ပိုကျပ်နေတယ်။ ကားသမားတွေက လည်း ကုန်ရမှ ကိုက်တာကိုး။ ဒီတော့ ကားတွေလည်း အတက်၊အဆင်း သိသိသာသာ နည်းသွားတယ်။”
လွယ်ဂျယ်မှ ထွက်လာသည့်ကားများကိုလည်း တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတင်ဆောင်ခွင့် ပိတ်ထား သည့်အတွက် မှန်လုံ နှင့် ဟိုင်းလတ်ကားများ ပြေးဆွဲမှု ထက်ဝက်ကျော် လျော့နည်းသွား သည်ဟု လွယ်ဂျယ်တဖက်ကမ်း၊ တရုတ် ပြည် လားရင်းဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
“ကားက အရမ်းနည်းသွားတာ။ ကျန်းဖုန်းဘက်ကနေ သွင်းနေတဲ့ တရုတ်ပိတ်အုပ်တို့၊ အဝတ်အထည် တို့၊ ဆေးဝါးတို့ လူသုံးကုန်တွေ ဘာဆိုဘာမှ သယ်လို့မရဘူး။ ခရီးသည် တွေချည်းဆို ကားသမား လည်း မကိုက်ဘူး။ ခရီးသည်ဆို တာကလည်း ကုန်သည်တွေ ဘဲရှိတာ။ အဆင်းကုန် မသယ်ရတော့ ကုန်သည်တွေလည်း နည်းသွားတယ်။ အတက်ကုန် ဆိုရင် ဆန်တို့၊ ဆန်ကွဲတို့၊ စားသောက်ကုန်တို့ကို လွယ်ဂျယ်၊ လားရင်းတို့ဘက် လာရောင်း၊ အပြန်မှာ တရုတ်ပစ္စည်း ပြန်သယ်။ အဲဒါ မရဘူးဆိုတော့ ကားကော၊ ကုန်သည်ကော အရမ်းနည်းသွားတယ်။”
တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် နမ်းခမ်းနှင့် မန်ဝိန်းကြီးမှတဆင့် ဗန်းမော်သို့ သွားရာလမ်းတွင် ဗန်းမော်ခရိုင် အာဏာ ပိုင်များက ကိုက်ထိပ်ကျေးရွာအထိ တက်ရောက်ကာ ဖမ်းဆီးနေ၍ အဆိုပါ လမ်းကြောင်းတွင် လုပ်ကိုင်စား နေသည့် ဒေသခံကုန်သည်များ အခက်တွေ့ နေကြရသည်ဟု ကုန်သည်များက ပြောသည်။
တရုတ်ပြည်၊ ကျယ်ဂေါင်တဆင့် မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းသို့ ဆိုင်ကယ်မှောင်ခို တင်သွင်းမှု များကို ဖမ်းဆီး၊ ငွေ တောင်းမှုများရှိရာ ယခုလ(၂၇)ရက်နေ့တွင် (၁ဝ၅)မိုင်အနီး၌ ဒေသခံရဲ နှစ်ဦးက ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမား ဆယ် ဦး ခန့်အား တားဆီးပြီး ငွေတောင်းရာမှ ပြဿနာ ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု မူဆယ်ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
“တောင်းတာများလာလို့ ဆိုင်ကယ်သမားတွေလည်း အခုက သိပ်မကိုက်တော့ဘူ။ ကျောက်ဆည်၊ မုံရွာအထိ သွားနိုင်မှ နှစ်သောင်း လောက်ကျန်တယ်။ လားရှိုး တင် လောက်ဆို ထောင်ပိုင်းဘဲ ကျန် တာတဲ့။ အဲလိုအချိန်မှာ ရဲနှစ်ယောက်က သွားပြီး ဖမ်းမယ် ဆီးမယ်လုပ်ရာက ဟိုက ပြန်ချမယ်လုပ် တော့ ရဲနှစ်ယောက် ထွက်ပြေးလာခဲ့တာတဲ့။”
ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးက မူဆယ်(၁ဝ၅)မိုင်ဇုန်သို့ အခုလ(၁၁)ရက်နေ့က ရောက်ရှိ လာစဉ် တရားဝင် ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုထားပြီဖြစ်၍ မှောင်ခိုကုန်သွယ်မှုမရှိသင့်တော့ကြောင်း၊ အခွန်ဆောင်ပြီးရောင်းဝယ်တတ် လာ အောင် ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ က ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းပညာပေးကြရန် မှာကြားသွားသည်။
မြောက်ပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှူးခရီးစဉ်တွင် ရက်သတ္တတပတ်အတွင်း ယာဉ်တိုက်မှု နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့
ဇူလိုင်လ ၃၁ရက်၊ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်။
မြစ်ကြီးနားမြို့မှ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် စိုးဝင်းက ကချင်လွတ်မြောက် ရေးအဖွဲ့ ထိန်း ချုပ်ရာ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ လိုင်ဇာသို့ ယနေ့မနက်ပိုင်းက ထွက်လာစဉ် လမ်းခရီး၌ ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။
မပခ တိုင်းမှူးခရီးစဉ် ကားတန်း၏ ရှေ့ပြေးလမ်းကြောင်းရှင်းသည့် အဖွဲ့မှကားနံပတ် (၁/ခ၃ဝ၈၅ )စစ်ရောင် ဖိုးဝှီးကားသည် နန့်ဆန်ယန်ကျေးရွာအနီး ကုန်းအဆင်းတွင် မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ ဦးတည်မောင်းလာသည့် ဟိုင်း လတ်စ် ကားနှင့် အမြီးပိုင်းတိုက်မိပြီး ခရီးသည်တင်ကား တိမ်းမှောက်ကာ လူသုံးဦး ဒဏ်ရာရရှိသွားသည်ဟု နန့်ဆန်ယန် ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
“ဟိုင်းလတ်စ်ကားကဘေးကိုကွေ့လိုက်တော့ အမြီးပိုင်းကိုချိတ်မိပြီး ကားကနှစ်ပတ်လောက် လိမ့်သွား တာတဲ့။ ဒဏ်ရာရတာ သုံးယောက်၊ တယောက်ကတော့ လည်ပင်အရိုးထိသွားတယ်။ သူကတော့ ဒဏ် ရာ ပြင်းတယ်။ ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ ပွန်းပဲ့သွားတယ်။”
ပြီးခဲ့သည့်(၂၄)ရက် သောကြာနေ့တွင်လည်း မခပတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်း၏ ဝိုင်းမော် အခြေစိုက် ခလရ(၅၈) တပ်ရင်းသို့ ထွက်လာစဉ် ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ မိုင်းနားကျေးရွာအနီး၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်တွင် ရှေ့ပြေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ လိုက်ပါလာသည့်ကားက တိုက်မိ သဖြင့် မိုင်းနားကျေးရွာ၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ လဝမ်ကထောင်နေ အသက်(၄၅)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး တဦး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားပြီး သုံးဦး ဒဏ်ရာရရှိသည်ဟု ဝိုင်းမော် ဒေသခံ တဦးက ပြောသည်။
“ဒေါ်ကျောင်းဖဒိုင်နွယ်နဲ့ သူ့အဖေါ် သုံးယောက်နဲ့ လမ်းဖြတ်ဖို့ လုပ်နေတုန်း ကားက ဝင်တိုက် သွား တာ။ သူက ပွဲချင်းပြီး သေသွားတယ်။ အခုသူ့ရဲ့ (၁ဝ)နှစ်အရွယ် သမီးလေးကျန်ထား တယ်။ သူ့အ တွက် ငွေနည်းနည်းပါးပါးလေး လာပေးတယ်လို့တော့ ကြားရတယ်။ အရပ်သား အချင်ချင်း ယာဉ် တိုက်မှုဖြစ်ရင်တောင် တဘက်လူကျေနပ်အောင် လုပ်ပေးရတာလေ။ အခုက တိုင်းမှူးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကားတန်းက ဖြစ်တာ ပိုပြီးတောင် ကျေနပ်အောင် လုပ်ပေးသင့်တယ်၊ အခုလို ဖြစ်တာကို ဒီမှာ ဘယ် သူမှ မကျေနပ်ကြဘူး။”
ဒဏ်ရာရှိသူများကို မြစ်ကြီးနားဆေးရုံတွင် ကုသမှုခံယူနေဆဲဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်အတွင်း မြောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် အုန်းမြင့် လက်ထက်တွင်လည်း မြစ်ကြီးနား မှ ဗန်းမော်သို့ မော်တော်ယာဉ်တန်းဖြင့် ထွက်လာစဉ် ရှေ့ပြေးအဖွဲ့ကားတန်းက နန့်ဆန်ယန်ကျေးရွာအတွင်း ဆိုင် ကယ်စီးလာသည့် ဒေသခံ အမျိုးသမီးတဦးအား တိုက်မိ၍ သေဆုံးသွားခဲ့သေးသည်။
နအဖတပ် စစ်ပြေးဆယ်ဦးခန့်ကို တရုတ်ဘက်က ဖမ်းပြီး လွှဲပေး
မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံ ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်းရှိ စစ်တပ်များမှ ထွက်ပြေး လာသည့် စစ်သား ဆယ်ဦးခန့်ကို ကချင်ပြည်နယ်၊ လွယ်ဂျယ်မြို့တဖက်ကမ်း တရုတ်ပြည် ကျန်းဖုန်းဒေသအတွင်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး မြန်မာဘက်သို့ အခုလ(၂၉)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးလိုက်သည်။
ဗန်းမော်နှင့် မံစီအခြေစိုက် တပ်ရင်းများမှ မကြာသေးမီက ထွက်ပြေးလာပြီး ကျန်းဖုန်းဒေသ အတွင်း လာရောက် အခြေချရန် ပြင်ဆင်နေစဉ် တရုတ် အာဏာပိုင်များ၏ ဖမ်းဆီးခြင်း ခံခဲ့ရပြီးနောက် ပြန်ပို့ခံရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကျန်းဖုန်းမြို့မှ မြန်မာတဦးက ပြောသည်။
“အဲဒီနေ့က ကားစုစုပေါင်း ခုနှစ်စီးရှိတယ်။ မနက်(၁ဝ)နာရီလောက်မှာ လွယ်ဂျယ်ဘက်ကို နယ်စပ် က လားရင်း ရွာကနေလွှဲလိုက်တယ်။စစ်ပြေး ဆယ်ယောက်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့က ဗန်း မော်၊ မံစီဘက်က ပြေးလာတာတဲ့။ ကျန်းဖုန်းမှာ အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့၊ ကြုံရာ အလုပ်ပေါ့။ တရုတ် စ ကား ကမတတ်၊ နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်တွေ၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် လက်မှတ်တွေလည်းမပါဘူးတဲ့။ ယောင် လည်လည်ဖြစ်နေတုန်းမှာ အားလုံး အဖမ်းခံရပြီး ပြန်လွှဲပေးတာ။”
မြန်မာစစ်တပ်မှ ထွက်ပြေးပြီး တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်တွင် လာရောက်အခြေချနေသူများ ရှိနေသော်လည်း ယခု ကဲ့သို့ တရုတ်နယ်စပ်အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးပြီး ပြန်ပို့ခြင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်လည်း ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု စီရင်ချက် သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ ရွှေ့ဆိုင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုကို အင်းစိန်ထောင်တွင်း အထူးတရားရုံးက ဒီကနေ့ စီရင်ချက် အမိန့်မချမှတ်ပဲ သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ကို ထပ်မံရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားသူကြီးတွေဘက်က ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို စဉ်းစားသုံးသပ်နေဆဲ ဖြစ်တာကြောင့်ဆိုပြီး အကြောင်းပြခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ ဦးဥာဏ်ဝင်းက အာအက်ဖ်အေကိုပြောပါတယ်။
ဦးဥာဏ်ဝင်း။ ။'ဒီအမှုဟာ ဥပဒေပြဿနာ ရှိတာအမှန်ပဲလေ။ အဲဒီဥပဒေပြဿနာကို ဒီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ စဉ်းစားတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့က ကျေနပ်ပါတယ်။ ဥပဒေပြဿနာက သုံးလေးခုမက ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဓိက ပြဿနာက ၇၄ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေ အသုံးပြု၍ ရမရပေါ့။ အဲဒါအဓိကပါ။ ကျနော်တို့က အသုံးပြုလို့ မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဘက်ကနေ တင်ပြထားတယ်။ ဒါအတော်အဓိကကျတဲ့ ပြဿနာတခုပါ'
အာဏာပိုင်တွေဘက်က ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာရှိတယ်လို့ အကြောင်းပြပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပေမယ့် ဘယ်ဥပဒေ ပြဿနာ ဆိုတာကို တိတိကျကျ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်၊၊
တရားသူကြီးတွေက စီရင်ချမယ့်ရက်ကို ထပ်ပြီး ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တဲ့အကြောင်း မကြေညာခင် တရားရုံးကို တက်ရောက်လာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လာရောက် နားထောင်နေကြတဲ့ နိုင်ငံတကာသံတမန်တွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ နှုတ်ဆက်စကား ပြောဆိုရာမှာ သူ့အနေနဲ့ ဒီကနေ့ တရားရုံးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ရှိမရှိဆိုတာကို လက်တွေ့ပြသမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ တရားရုံးချိန်ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း မနက် ၁ဝ နာရီမှာ စတင်ခဲ့ပေမယ့် သံတမန်တွေ တက်ရောက်နားထောင်ဖို့အတွက် အစိုးရအာဏာပိုင်တွေက နာရီပိုင်းအလိုကျမှ ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ တရုတ်၊ ရုရှနဲ့ အမေရိကန်သံတမန်တွေလည်း ပါဝင်တယ်လို့ ဦးဥာဏ်ဝင်းကပြောပါတယ်။
ဦးဥာဏ်ဝင်း။ ။'တော်တော်များများတက်ပါတယ်။ သံရုံးဘယ်နှစ်ရုံးလည်းတော့ မသိဘူး။ ကျနော်ထင်တယ် ဆယ်ရုံးအထက်မှာ ရှိတယ်။ ကျနော်အကုန်တော့မသိဘူး။ အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ အီတလီ၊ ဂျပန်၊ တရုတ်လည်းပါတယ်၊ စင်္ကာပူ။ တော်တော်များပါတယ်'
တရားရုံးအနေနဲ့ ဒီကနေ့မှာ စီရင်ချက် အမိန့်ချမှတ်မယ်လို့ အများစုက မျှော်လင့်ထားတဲ့အတွက် အာဏာပိုင်တွေဘက်က တက်ရောက်ခွင့် မပြုခဲ့ဘူးဆိုရင် အင်းစိန်ထောင်တွင်းတရားရုံးနဲ့ အနီးဆုံးနေရာအထိ သွားရောက်စောင့်ဆိုင်း နားထောင်ကြဖို့ သံတမန်အများစုက ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုအပေါ် ချမှတ်မယ့် စီရင်ချက်ကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က စောင့်ကြည်နေပြီး ကုလသမဂ္ဂ အနေနဲ့လည်း ဒီစီရင်ချက်အပေါ်မှာ တုန့်ပြန်မှုတွေ ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ အတွင်းရေးမှုးချုပ် ဘန်ကီးမွန်းကလည်း မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းအတွင်းက ပြောဆိုထားပါတယ်။
အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင် သုံးဆယ်နီးပါး ဖမ်းဆီးခံရ
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စီရင်ချက်ချမယ်လို့ ပြောထားတဲ့ ဇူလိုင် ၃၁ ရက် မတိုင်ခင်ညက ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ မကွေးတိုင်းအတွင်းက အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီဝင် ၃ဝ နီးပါးကို သက်ဆိုင်ရာက လိုက်လံဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦး အပါအဝင် နယ်အနှံ့အပြားက ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်တွေရဲ့ စာရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးသိရတဲ့ အခြေအနေတွေကို အန်အယ်လ်ဒီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအုန်းကြိုင်က အခုလိုပြောပြပါတယ်။
ဦးအုန်းကြိုင်။ ။'ရေနံချောင်းက ကိုမြင့်ငွေ၊ ကိုတင့်လွင်၊ ကိုသန်းမောင်၊ ကိုခင်ဝင်း၊ နောက် အောင်လံက ဦးအေးမြင့်၊ ကိုမင်းမောင်၊ တောင်တွင်းက ကိုစိုး၊ ကိုပါလေး၊ ကိုကျော်နိုင်၊ မြို့သစ်က ဦးသာအောင်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ဇင်မမထွန်း၊ ဦးသန်းမြင့် ဒဂုံမြို့သစ်က ထိန်ဝင်း၊ မခင်ဝင်းကြည်၊ မင်းဘူးစကု က ဦးသောင်းစိုး၊ နေမျိုးကျော်၊ ပွင့်ဖြူက ကိုအောင်ဝင်း၊ ကိုအောင်တင်လင်း၊ မင်္ဂလာဒုံက မခင်မြတ်သူ၊ ဒေါပုံက ကိုနေလင်းကျော်၊ သာကေတက ကိုနေလင်းစိုး၊ နောက်ပြီး ပခုက္ကူက ကိုပိုက်ကို၊ ကိုကျော်မြင့်အေး၊ ကိုဌေးဝင်း၊ နောက် ဦးတင်ညွှန့် ပါ။ ဘာလို့ဖမ်းတယ်ဆိုတာကတော့ မသိဘူးဗျ၊ အဲဒီ သက်ဆိုင်ရာဒေသတွေမှာရှိတဲ့ ရဲတို့ ရပ်ကွက်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက လာပြီးတော့ ခေါ်သွားတာတွေပဲ သိတယ်'
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် လူငယ်အဖွဲ့ဝင် မခင်မြတ်သူနဲ့ ဒဂုံမြို့သစ်က ကိုထိန်ဝင်းတို့ကို ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အန်အယ်လ်ဒီလူငယ် မဖြူဖြူသင်းက ခုလိုပြောပြပါတယ်။
မဖြူဖြူသင်း။ ။'ခင်မြတ်သူကိုကျတော့ မနေ့ညက ညနေစောင်းလောက်က သူ့အဖေကို ခေါ်တယ်တဲ့။ သူ့အဖေကို ခေါ်ပြီးတော့ ဒီနေ့ အင်းစိန်ကို မသွားဖို့ တားပေးပါလို့ ပြောတယ်။ ပြောတော့ သူ့အဖေက ဘာမှ ဝန်မခံပေးဘူးတဲ့။ ဝန်မခံပေးတဲ့ အခါကျတော့ ည ၁ နာရီခွဲလောက်မှာ လာခေါ်သွားတယ်တဲ့။ ခနပါဆိုပြီး ပြောတယ်တဲ့၊ အခု သူ့ကို မင်္ဂလာဒုံ ရဲစခန်းမှာ ထားတယ်။ သူတို့ သွားတွေ့လို့တော့ ရတယ်တဲ့။ မနက်က သူ့အမနဲ့ တွေ့လိုက်တယ်လေ၊ စခန်းမှူးက ပြောတယ်တဲ့။ ကာလအချိန် တခုအထိ ကြာအောင် သူတို့ခေါ်ထားမယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ပြောတယ်တဲ့။ အဓိကတော့ အင်းစိန်ထောင်ရှေ့ မသွားဖို့ပေါ့။ ကိုထိန်ဝင်းကတော့ ညက ပါသွားတာပဲ ကြားတယ်'
မကွေးတိုင်း ရေနံချောင်းမြို့က အန်အယ်လ်ဒီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်ဝင်း၊ အဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဦးတင့်လွင်၊ ဦးမြင့်ငွေနဲ့ ဦးသန်းအောင်တို့ကို ည ၁ နာရီကျော်လောက်မှာ ရေနံချောင်းရဲစခန်းက ခနလေး မေးစရာရှိလို့ပါ ဆိုပြီး ခေါ်သွားလို့ အဝတ်တထည် ကိုယ်တခုနဲ့ပဲ လိုက်သွားတာလို့ ဦးတင့်လွင်ရဲ့ဇနီး ဒေါ်ခင်မော်သန်းက ပြောပါတယ်။
မင်းဘူး၊ စကုနဲ့ ပွင့်ဖြူမြို့က ပါတီဝင်တွေ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကို မကွေးတိုင်း အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီဝင်တဦးက အာအက်ဖ်အေကို ခုလိုပြောပြပါတယ်။
အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်။ ။'ကျမတို့ ဒီမှာတော့ တိတိကျကျ မသိရသေးဘူးရှင်၊ ဘယ်ကိုခေါ်တယ်ဆိုတာ။ မင်းဘူးက ဦးသောင်းစိုးပါတယ်။ နောက်တခါ စကုက နေမျိုးကျော်လည်း ပါသွားတယ်။ ဦးသောင်းစိုးက အမှတ် ၂ ထဲမှာ၊ အမှတ် ၂ ရဲစခန်းပေါ့။ နေမျိုးကျော်က အမှတ် ၁ ရဲစခန်းထဲမှာတဲ့။ နောက်တခါ ပွင့်ဖြူက ကိုအောင်ဝင်းနဲ့ ကျန်တဲ့တယောက်က ပွင့်ဖြူရဲစခန်းထဲမှာပဲ ရှိတယ်တဲ့'
တောင်တွင်းကြီး အန်အယ်လ်ဒီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်စိုး၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးပါလေးနဲ့ အဖွဲ့ဝင် ကိုကျော်နိုင်တို့ကို ည ၁၂ နာရီလောက်မှာ လာခေါ်သွားပြီး ဘယ်မှာထားတယ်ဆိုတာ မသိရသေးတဲ့အကြောင်း တောင်တွင်းကြီး အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင် တဦးက ပြောပါတယ်။
တောင်တွင်းကြီးပါတီဝင်။ ။'အခု သူတို့ အိမ်တွေကတော့ လိုက်တော့ လိုက်နေကြတုန်း။ ဘာမှတော့ အထွေအထူး မပြောဘူးဗျ။ သူတို့က ဒီတိုင်းပဲ၊ ခန လိုက်ခဲ့ပါအုံး ဒီလောက်ပဲပြောတာ။ ကျနော်တို့ကတော့ တွက်ထားပြီးသားပေါ့ဗျာ'
မကွေးတိုင်း အောင်လံမြို့နယ် အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင် ဦးအေးမြင့်နဲ့ ကိုမင်းမောင်တို့နှစ်ဦးကို ညအချိန်မတော် အကြောင်းပြချက်မရှိ လာဖမ်းသွားခဲ့ပုံကို မိသားစုနဲ့နီးစပ်တဲ့ ဒေသခံအမျိုးသမီးက အခုလို ပြောပါတယ်။
ဒေသခံအမျိုးသမီး။ ။'ညက တနာရီလောက်ကလို့ ပြောတယ်၊ အဖမ်းခံရတာ။ ဦးအေးမြင့်ရယ် ကိုမင်းမောင်ရယ် မိသားစုဆီက ခေါ်သွားတုန်းကတော့ ဧည့်စာရင်း ဝင်စစ်သလိုနဲ့။ အဲလိုမျိုး ဝင်စစ်ပြီးတော့ သူတို့နဲ့ လိုက်ခဲ့ဖို့ ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ သူတို့အမျိုးသမီးတွေက လာခေါ်တဲ့ သူတွေရဲ့ နာမည်တွေဘာတွေကို တောင်းထားတယ်တဲ့။ ဦးအေးမြင့်ကို ခေါ်သွားတဲ့သူတွေရဲ့ နာမည်ကိုတော့ မသိဘူးရှင့်။ ကိုမင်းမောင်ကို ခေါ်သွားတာတော့ မြို့နယ်မှူးဦးစိုးသန်းတဲ့၊ ဒုရဲအုပ် ကျော်ထူးတဲ့ အဲလိုပြောတယ်။ အဲဒီမှာတော့ ၁ဝ ဦးလောက် ပါတယ်ပြောတယ်၊ မြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေပဲ'
သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေက ဒီကနေ့မနက် အောင်လံမြို့နယ် ရဲစခန်းကို သွားရောက် စုံစမ်းတဲ့အခါ ရဲစခန်းမှာမရှိပဲ ဘယ်နေရာမှာပို့ ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်း မပြောဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ခုလိုဖမ်းဆီးမှုတွေ လုပ်နေတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို သေချာမသိရသေးပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှု အမိန့်ချမယ်ဆိုတဲ့ရက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့် တကယ်လို့များ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြစ်ဒဏ်ချခဲ့ရင် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှု တစုံတရာ ဖြစ်လာနိုင်တာကို ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့သဘောနဲ့ စစ်အစိုးရက လက်ဦးမှုယူနေတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတချို့က ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးတံခါး မြန်မာစစ်အစိုးရ ပိတ်ပစ်
မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးဥပဒေတွေကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရုံးတင်တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက် နိုင်ငံတဝှမ်းက အန်အယ်ဒီ ပါတီဝင်တွေကိုပါ ဖမ်းဆီးနှိပ်ကွပ်မှုတွေ တိုးမြှင့်ပြုလုပ်နေတာဟာ မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံတကာအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေး တံခါးတွေကို ပိတ်ပစ်လိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်ပဲလို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ တောမတ်ကင်တားနားက ဒီကနေ့ မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရကို အမေရိကန်နဲ့ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ ရှုတ်ချ
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရုံးတင်တရားစွဲဆိုခံရမှု အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှု အခြေအနေတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်း အမေရိကန်သမ္မတနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတတို့က တညီတညွတ်တည်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်၊၊
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂလိုရီယာ အာရိုယိုနဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ ဘာရက် အိုဘားမားတို့ သမ္မတအိမ်ဖြူတော်မှာ ကြာသပတေးနေ့က တွေ့ဆုံကြရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကို အလေးထား ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်၊၊
သမ္မတ အာရိုယိုက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု၊ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ အနုမြူအစီအစဉ် ဖော်ဆောင်မှု ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အမေရိကန်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်အတိုင်း တသဘောတည်းရှိတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်၊၊ ဒါ့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ရော၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်လို့ပါ အမေရိကန်နဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ဟာ ထပ်တူထပ်မျှ ဖြစ်တယ်လို့ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ အာရိုယိုက ပြောပါတယ်၊၊
သမ္မတ အိုဘားမားကလည်း အာရှနိုင်ငံတွေအပေါ် အမေရိကန်က ချမှတ်ကျင့်သုံးနေတဲ့ မူဝါဒတွေကို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ထောက်ခံအားပေးနေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း အပြန်အလှန် ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်၊၊
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တက်တက်ကြွကြွ တောင်းဆိုကြိုးပမ်းနေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပြီး သမ္မတအာရိုယိုဟာ အခါအခွင့်သင့်တိုင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးကိစ္စတွေကို ခုလို အလေးထား ပြောဆိုနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဖိလစ်ပိုင် ကွန်ဂရက် လွှတ်တော်အမတ် Lorenzo Tanada က ပြောပါတယ်၊၊
သမ္မတအိုဘားမားနဲ့ သမ္မတအာရိုယိုတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဟာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဥ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အတူ ဆောင်ရွက်သွားကြမယ့် နည်းလမ်းတွေကို အလေးထားရှာဖွေ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ ဖိလစ်ပိုင် လွှတ်တော်အမတ် Lorenzo Tanada က ပြောပါတယ်၊၊ ဒါ့ပြင် သူက မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေကို ဆက်လက်ဖမ်းဆီးနှိပ်ကွပ်နေတာတွေကို အမြန်ဆုံး ရပ်တံ့ဖို့ကိုလည်း တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်၊၊
စစ်အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ အမြင်မတူသူတွေကို ဖမ်းဆီးနှိပ်ကွပ်နေတာတွေကို ရပ်တံ့ပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို ခ္ဆွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုပါတယ်၊၊ စစ်အစိုးရအနေနဲ့ တောင်းဆိုချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်လာမယ်ဆိုရင် အနိမ့်ဆုံး ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ လမ်းခင်းပေးရာ ရောက်နိုင်ပါတယ်၊၊ ဒါ့ပြင် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အသင့်တော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ထောင်ချခံထားရတဲ့အတွက် သူတို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာလဲလို့ ဖိလစ်ပိုင် လွှတ်တော်အမတ် မစ္စတာ တာနာဒါ က မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်၊၊ လွှတ်တော်အမတ် မစ္စတာ တာနာဒါဟာ ဖိလစ်ပိုင်လွှတ်တော် လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်ပါတယ်၊၊
အိမ်ဖြူတော်က သမ္မတနှစ်ဦး ဆွေးနွေးပွဲမှာ မစ္စတာအိုဘားမားက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့ အာရှရဲ့ စံတန်ဖိုးတွေပေါ် အခြေပြုပြီး လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု၊ မြောက်ကိုရီးယား အရေးကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခိုင်အမာ ရပ်တည်ပြောဆိုနေတဲ့အပေါ် အသိအမှတ်ပြု ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်၊၊ ဒါ့ပြင် မစ္စတာအိုဘားမားက သူ့အနေနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကို အလည်အပတ် သွားရောက်ဖို့ ရှိတဲ့အပြင် အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ အမေရိကန်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ဦးဆောင်ဦးရွက် ပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်၊၊
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ မစ္စက် အာရိုယိုက အမေရိကန်သမ္မတနဲ့ ဆွေးနွေးပြောဆို ခဲ့မှုတွေအပေါ် အလွန်နှစ်ထောင်းအားရဖြစ်မိတယ်လို့ ဖိလစ်ပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်၊၊
ဒီအတောအတွင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် မနီလာမြို့က မြန်မာစစ်အစိုးရ သံရုံးရှေ့မှာ ဒီကနေ့ တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/31/2009 1 အကြံပြုခြင်း